HAPPY NEW YEAR မှာ ပြောချင်တဲ့ စကားတွေ ...
Hopes accompanied us to the next year's dates
All what we have done are also with us asashade
Pure the heart for knowing the true rights
Pure the mind for making the best times
You are the one who can manage to earn both cold and warm
New Year is the one that remind u to value the length of time
Every change won't be same what you want to gain
We have to try again to attain the various aims
Your view can be changed according to your brain
Every point of view can make you in sane
A man should beaman who can take responsibility of his stand
Remember that you can't pass clearly to the new year if you have the unfinished affairs in the old year.
ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး ... အင်တာနက်ထဲမှာ လိုက်ရှာရင်းနဲ့ Happy New Year ဆိုတာကို အမျိုးမျိုး ကဗျာလေးတွေစပ်ထားကြတာ တွေ့လိုက်တာနဲ့ ကျွန်တော်လဲ ကိုယ့်ဖာသာကို အဲဒါမျိုးလေး စပ်ကြည့်ရင် ကောင်းမယ်ဆိုပြီး ... လျှောက်ရေးမိတာလေးပါ ...။ နှစ်သစ်ကူး အထိမ်းအမှတ်သဘောကို မဆောင်ရင်တော့လဲ ဆောရီးပါ ...။ နှစ်သစ်တစ်ခုအတွက် ကျွန်တော်က ပေးတဲ့ စကားလက်ဆောင်လေးလို့ပဲ သဘောထား စေချင်ပါတယ် ...။
နှစ်သစ်ရဲ့နေ့စွဲတွေထဲကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေက အတူလိုက်ပါလာကြတယ် ...။
ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့်ထားတာတွေ ဘာတစ်ခုမျှမှ ဖြစ်မလာသေးတာလေ ... အဲဒီ့တော့လဲ အဲဒီ့မျှော်လင့်ခြင်းတွေကို နှစ်သစ်တစ်ခုထဲကို ကျွန်တော်တို့ ဆက်လက်ထမ်းပိုးသယ်ဆောင်သွားကြရမှာ အသေအချာပဲပေါ့ ...။
ကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးခဲ့တဲ့ အရာတွေကလည်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ကနေ အရိပ်တွေလို ကပ်ပါလာကြတယ် ...။
ကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့သလား၊ မကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့သလား အဲဒါတွေရဲ့ အကျိုးဆက်တွေကို ကျွန်တော်တို့တွေ နှစ်ဟောင်းထဲမှာ ထားခဲ့လို့မရပါဘူး ...။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေပီပီ ကံကံ၏အကျိုးကို လက်ခံယုံကြည်တယ်ဆိုရင် ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်းမှုတွေကိုခံစားဖို့နဲ့ ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့မကောင်းမှုတွေအတွက် ၀ဋ်ပြန်ခံဖို့ ကျွန်တော် တို့တွေ ကြိုတွေးထားသင့်ပါတယ် ... ။
စစ်မှန်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုသိဖို့အတွက် ... ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကိုသန့်စင်ထားကြမယ် ။
ကျွန်တော်တို့တွေဟာ လူရယ်လို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင် လူသားတစ်ယောက်ရဲ့ စစ်မှန်တဲ့ အခွင့်အရေးဆိုတာ ဘာတွေကိုပြောတာလဲ ဆိုတဲ့မေးခွန်းကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အတွက်ရော သူများတွေအတွက်ပါ ဖြေနိုင်ဖို့ ကြိုးစားထားသင့်ပါတယ် ...။ လူတွေရဲ့စစ်မှန်တဲ့အခွင့်အရေးဆိုတာကို သိနိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားတွေ သန့်စင်နေဖို့လိုပါတယ် ...။ နှလုံးသားတွေမသန့်စင်ဘူးဆိုရင် ... ကိုယ့်အတွက် အခွင့်အရေးကို တိုးတွက် တတ်ပြီး သူများရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုတော့ လျှော့တွက်တတ်ပါတယ် ...။ ဒါကြောင့် နှလုံးသားတွေကို သန့်စင်ပြီး ... လူတိုင်းရဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို သိနေအောင် ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားကြပါစို့ဗျာ ...။
အကောင်းဆုံး အချိန်ကာလတွေကို ဖန်တီးဖို့ ... ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စိတ်တွေကို သန့်စင်ထားကြမယ် ။
ကျွန်တော်တို့ ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ အချိန်ကာလတွေက အတိတ်ဆိုတဲ့ အမည်နာမတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ နှစ်ဟောင်းမှာ ကျန်ခဲ့မှာဖြစ်ပေမယ့် ...။ အဲဒီ့ အတိတ်ဆိုတာတွေကပဲ တစ်နေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာ သမိုင်းဆိုတဲ့ အမည်နာမ အသစ် တစ်ခုနဲ့ အားလုံးရဲ့ မျက်မှောက်မှာ ပြန်လည် ပေါ်ထွက်လာမယ်ဆိုတာ အသေအချာပါပဲ ...။ သမိုင်းရဲ့ စာမျက်နှာတွေမှာ ဘာတွေတင်ကျန်ရစ်ခဲ့သလဲ ဆိုတာဟာ မျက်မှော်ခေတ်ကလူတွေ သူတို့ရဲ့အချိန်ကာလ တွေကို ဘယ်လိုကုန်ဆုံးစေကြပြီး ဘာတွေကိုဖန်တီးနေကြသလဲ ဆိုတဲ့ အပေါ်မှာ အများကြီးမူတည်ပါတယ် ...။ ကျွန်တော်တို့တွေ အချိန်ကာလတွေကို အကောင်းဆုံးဖန်တီးနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ နေရာမှာလဲ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ စိတ်တွေ သန့်စင်မွန်မြတ်နေကြဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ် ...။ စိတ်ဓါတ်အောက်တန်းကျသူတွေများနေလို့ကတော့ ... အချိန်ကာလတွေက ညစ်ပေမှောင်မှိုင်းနေမှာဖြစ်သလို အဲဒီ့ခေတ်ရဲ့ သမိုင်းဟာလဲ နှောင်းလူတွေရဲ့ခေတ်မှာ ရိုင်းစိုင်းနေမှာသေချာပါတယ် ...။
သင်ဟာ အေးစက်ခြင်းနဲ့ နွေးထွေးခြင်း ဘယ်အရာကို မဆိုရယူနိုင်အောင် ထိမ်းကွပ်နိုင်တဲ့ တစ်ဦးတည်းသော သူဖြစ်တယ် ...။
လောကဟာ ဆန့်ကျင်ဘက်တွေများစွာနဲ့ သက်ဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ ... လူတို့ရဲ့ အသိုင်းအ၀န်းတစ်ခုပါ ...။ အကောင်းလား အဆိုးလား၊ အနိုင်လား အရှုံးလား ၊ အချစ်လား အမုန်းလား ဘယ်အရာကိုပဲ သင်ရနေသလဲဆိုတာဟာ သင့်ရဲ့ လက်ထဲမှာပဲရှိတဲ့ သင်တစ်ယောက်တည်းပိုင်တဲ့ ရွေးချယ်မှုပဲဖြစ်ပါတယ် ...။
သင်ရနေတဲ့ အဆိုးအကောင်း၊ အကျိုးအပြစ်တွေအတွက် ဘယ်အရာကိုမှ လွှဲချမနေပါနဲ့ ... အဲဒါတွေ အားလုံးဟာ သင်ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခဲ့တာတွေပါပဲ ...။
နှစ်သစ်တစ်ခုဆိုတာ အချိန်ကာလကို ကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးထားတတ်စေဖို့ ကျွန်တော်တို့ကို သတိပေးတဲ့ အရာတစ်ခုပါပဲ ...။
ဟုတ်ပါတယ် ...။ တခါတခါမှာ ဘ၀ထဲမှာ ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေရလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ ဘ၀ရဲ့ အနှစ်သာရတွေမှာ ပျော်ပါးယစ်မူးနေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်တို့တွေဟာ အချိန်ကာလဆိုတာနဲ့ သေခြင်းတရားဆိုတာကို မေ့လျှော့နေတတ်ကြပါတယ် ...။ နှစ်သစ်တစ်ခုကိုကူးတော့မှာ ... “ သြော် ... ဘာလိုလိုနဲ့ တစ်နှစ်ကုန်သွားပါရောလား ” “ သြော် ... ငါတို့တောင်သေဖို့ တစ်နှစ်ပိုနီးလာပြီပဲ” ဆိုတာမျိုးကို သတိရတတ်ကြတာပါ ...။ အဲဒီလို့ သတိရတတ်နေရင်ပဲ မဆိုးဘူးလို့ ဆိုရမှာပါပဲ ...။
့ ပြောင်းလဲမှုတိုင်းဟာ ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာတွေနဲ့ အမြဲတမ်းထပ်တူကျချင်မှ ကျမှာပါ ...။
အရာရာပြောင်းလဲ နေတဲ့လောကကြီးမှာ အချို့သောပြောင်းလဲမှုတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ ဖြစ်စေချင်တာနဲ့ ထပ်တူကျမနေတာမျိုးတွေ အများကြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ် ...။ ဒါဟာ သဘာဝတရားဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ လက်ခံထားဖို့လိုပါတယ် ...။ ဘ၀ရဲ့ ပြဿနာဆိုတာဟာ သင်္ချာပုစ္ဆာတစ်ပုဒ်လို ပုံသေနည်းတွေထဲ ထည့်တွက်လို့ ရတဲ့ အရာတွေမဟုတ်ပါဘူး ...။ အရာရာတိုင်းမှာ မျှော်လင့်ထားတဲ့ အတိုင်းဖြစ်မလားဘူးဆိုရင် ဆိုတဲ့ အခြေအနေတစ်ခုကို ... ကျွန်တော်တို့ အမြဲတမ်းထည့်သွင်းစဉ်းစားတတ်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ် ...။
We have to start again to attain the various aims
နှစ်သစ်တစ်ခုရောက်တိုင်းမှာ အမျိုးမျိုးသော ရည်မှန်းချက်တွေကို ရရှိဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့တွေ ထပ်မံကြိုးစားကြရတာပါပဲ ...။
ဘ၀ဆိုတာ အရွယ်ရောက်လာတဲ့ အချိန်ကစလို့ သေဆုံးသွားချိန်အထိ ပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးသော ရည်မှန်းချက် တွေ အတွက် အမြဲတမ်းကြိုးစားနေကြရတဲ့ ... သံသရာရဲ့ အချိန်အပိုင်းအခြားတစ်ခုပါပဲ ...။ ရည်မှန်းချက်တစ်ခုပြီးသွားတော့လဲ နောက်ထပ်ရည်မှန်းချက်တစ်ခုက ထပ်ပေါ်လာတာပါပဲ ...။ အဲဒီ့အတွက် ကျွန်တော်တို့တွေ ထပ်မံကြိုးစားကြရတာပါပဲ ...။ ဒီသဘောတရားကိုလဲ ကျွန်တော်တို့ နားလည်ထားဖို့လိုပါတယ် ...။
သင့်ရဲ့ဦးနှောက်(အသိဥာဏ်၊ အတွေးအခေါ်)ကိုလိုက်ပြီး သင့်ရဲ့ အမြင်တွေပြောင်းလဲနေမှာပါ ...။
ဦးနှောက်ဆိုတာကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင် ... အသိဥာဏ်၊ အတွေးအမြင်တွေလို့ မြင်လို့ရပါတယ် ...။ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ အသိဥာဏ်၊ အတွေးအမြင်ကို လိုက်ပြီး သူ့ရဲ့ အရာရာကို သုံးသပ်ရှုမြင်တဲ့ အမြင်ဟာလဲ မတူညီပဲကွဲလွဲသွားတတ်ပါတယ် ...။ အသိဥာဏ်နုံနဲ့ညံ့ဖျင်းသူတွေရဲ့ အချို့သော လုပ်ရပ်တွေမှာ ကျွန်တော်တို့တွေ မှင်သက်အံ့သြနေကြရတဲ့ အဖြစ်တွေရှိခဲ့ကြဖူးပါတယ် ... အဲဒီလို အဖြစ်မျိုးဖြစ်ရတာဟာ သူတို့ရဲ့ လူစဉ်မမီတဲ့ အသိဥာဏ်၊ မပြည့်ဝမရင့်ကျက်တဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကြောင့် ဖြစ်ရတာဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားရပါမယ် ...။
Every point of view without brain can make you in sane
အသိဥာဏ်ကင်းမဲ့တဲ့ ရှုထောင့်တိုင်းက သင့်ကို ရူးသွားစေနိုင်ပါတယ်။
အထင်မှား အမြင်မှားနေကြတဲ့သူတွေ၊ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကို ရှုထောင့်အမှားကနေ ကြည့်နေကြတဲ့သူတွေဟာ အရူးတွေလိုဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာလောကကိုအကျည်းတန်အောင် ဖျက်ဆီးနေကြတာ အားလုံး မြင်နေတွေ့နေ ကြရပါတယ် ...။ အဲဒါတွေကို နမူနာယူပြီး ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော်တို့လဲ ... ဘယ်လိုကိစ္စမျိုးကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ရှုထောင့်အမှားကနေမကြည့်မိဖို့နဲ့ အသိဥာဏ်နဲ့မယှဉ်တဲ့အမြင်နဲ့ မသုံးသပ်မိဖို့ကို ကြိုးစားကြဖို့လိုပါတယ်။
လူဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့ရပ်တည်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူရဲတဲ့သူပဲဖြစ်သင့်ပါတယ် ...။
လုပ်ချင်တာတွေကို လုပ်တုန်းကလုပ်ခဲ့ပြီး ပြီးတော့မှာ ဟိုလူ့လွှဲချ၊ ဒီလူ့လွှဲချလုပ်နေတာဟာ တာဝန်မသိတတ်တဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အပြုအမူပါ ...။ နေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာ လုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ တာဝန်ဆိုတာရှိပါတယ် ...။ ကိုယ်ယူထားတဲ့နေရာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်အရာရာကိုလုပ်ပြီး ရပိုင်ခွင့်အရာရာ ကို တစ်ခုမကျန်သိမ်းကျုံးယူနေပေမယ့် ... အဲဒီ့နေရာရဲ့ တာဝန်ရှိမှုအပိုင်းကိုတော့ သူမဟုတ်သလို လုပ်နေခြင်းဟာ ... စိတ်ဓါတ်အောက်တန်းကျသူတွေရဲ့ စရိုက်လက္ခဏာပါ ...။ ကျွန်တော်တို့အားလုံး စိတ်ဓါတ်မြင့်မြတ်တဲ့ လူသားတွေဖြစ်အောင် ကြိုးစားသင့်ပါတယ် ...။
နှစ်ဟောင်းမှာ လုပ်စရာတွေကျန်နေသေးသရွေ့ နှစ်သစ်ဆီကို သင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းထွက်သွားဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ သတိရပါ ...။
ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လိုပဲ ထားခဲ့တယ်ပြောပြော ပါလာမယ့်အရာတွေ အများကြီးပါ ...။ ထားခဲ့လို့ မရတာတွေ ၊ ထားခဲ့ဖို့ မသင့်တာတွေ၊ ထားခဲ့ဖို့ မလွယ်တာတွေ အများကြီးကို နှစ်သစ်တစ်ခုဆီ ကျွန်တော်တို့ ဆက်လက်သယ်ဆောင်သွားကြရမှာပါပဲ ...။ ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့ မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေရဲ့ အကျိုးဆက်တွေကလဲ ကျွန်တော်တို့ နဲ့အတူ ၂၀၀၈ ကိုလိုက်လာမှာပါပဲ ... ။ ကျွန်တော်တို့ ဆပ်စရာရှိတဲ့ အကြွေးတွေကလည်း ဆပ်လို့မကုန်သေးသရွေ့ နှစ်သစ်တွေနောက်ကို လိုက်လိုက်လာမှာပါပဲ ...။ နှစ်သစ်ကိုကူးသွားလို့ ... နှစ်ဟောင်းမှာ အားလုံးကျန်ခဲ့ပြီလို့ထင်ရင်တော့ အားလုံးမှားကုန်မှာဖြစ်ပါတယ် ...။
ရေးသားသူ - NayPhoneLatt at Monday, December 31, 20075comments:
သံလွင်အိပ်မက်ကို ဆက်မက်ကြမယ် ...
သုံးလတစ်ကြိမ်ထုတ်ဝေနေတဲ့ သံလွင်အိပ်မက် အွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်းရဲ့ ၁၂ကြိမ်မြောက် အစ်ရှူးကို အောက်တိုဘာလမှာ စာဖတ်သူများရဲ့ မျက်စိရှေ့မှောက်ကို အရောက်ပို့ပေးနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး …။ အဲဒီကာလက အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း စက်တင်ဘာရဲ့ ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးလှိုင်းအရှိန်နဲ့ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးရဲ့စိတ်တွေ ညိုညစ်ညစ်သန်းနေခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ သံလွင်ဝက်ဆိုက်ဒ်ကို တင်ထားတဲ့ ဆာဗာကလည်း အချိန်ကိုက်ဒေါင်းသွားခဲ့တယ်။ နောက်ပြီး ဆာဗာအသစ်ကို domain transfer လုပ်ဖို့ အခက်အခဲတချို့ ရှိခဲ့တဲ့အတွက် မမျှော်လင့်ဘဲ သံလွင်ဝက်ပ်ဆိုက်တစ်ခုလုံးကို လုံးဝပိတ်ထားလိုက်ရပါတယ်။ အထက်ပါ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သံလွင်အိပ်မက်အွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်းတစ်ခု world wide web ဆိုတဲ့ ကမ္ဘာအနှံဖြန့်ကျက်ထားတဲ့ ကွန်ယက်ကြီးပေါ်မှာ ခန့်ခန့်ထည်ထည်နဲ့ ယခု အချိန်ထိရပ်တည်နိုင်ဖို့အတွက် အသက်သွေးကြော ပမာဖြစ်ခဲ့တဲ့ သံလွင်အိပ်မက်ကို အစဉ်တဆိုက်စောင့်မျှော်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်တွေကို ကျွန်တော်တို့သံလွင်အိပ်မက်အဖွဲ့သားများ အနေနဲ့ အနူးအညွတ်တောင်းပန်လိုပါတယ် …။ အခုတော့ သံလွင်အိပ်မက် အမှတ် (၁)ကနေ (၁၁) အထိကို ဆာဗာအသစ်မှာ တင်ထားလိုက်ပြီးပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပေါ့လျှော့မှုကြောင့် စိတ်ကသိကအောက် ဖြစ်ခဲ့ကြရတဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်တွေရဲ့ စိတ်ခံစားမှုတွေကို… အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်မွမ်းမံထားတဲ့ အနှစ်သာရပြည့်ဝတဲ့ စာပေလက်ရာမွန်တွေနဲ့သာ ပြန်လည်ချွေးသိပ် ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့လဲ ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်ထားပါတယ် …။ အဲဒီ့ယုံကြည်ချက်တစ်ခုကို ကိုင်စွဲပြီး … အခု အချိန်မှာ သံလွင်အိပ်မက် အဖွဲ့သားတွေ အားလုံးဟာ … သံလွင်အိပ်မက် အမှတ် (၁၂)ကို ဇန်န၀ါရီလကုန် နောက်ဆုံးထားပြီး ထွက်ရှိနိုင်ဖို့အတွက် အစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေကြပြီဆိုတာ … စာဖတ်ပရိသတ် အပေါင်းကို အသိပေးလိုပါတယ် …။ ခုဆိုရင် သံလွင်အယ်ဒီတာအဖွဲ့ထဲကို ဇင်ကိုလတ်(ခ) စည်သူ(သံလွင်)၊ နေဘုန်းလတ် (ခ) နေမျိုး(သံလွင်)၊ ကိုငယ် (မန္တလေး) ၊ ညီညီ(သံလွင်) တို့ အပြင် မောင်ပွတ်ကလည်း အေးချမ်း(သံလွင်)ဆိုတဲ့ နာမည်ကိုယူပြီး သံလွင်အိပ်မက် အဖွဲ့သားတစ်ယောက်အဖြစ် ပါဝင်လာပြီဖြစ်လို့ လူအင်အားများ လာပြီလဲဖြစ်ပါတယ် …။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်း ဘလော့ဂ်ဂါတွေသာမက အခြားသော စာပေ၀ါသနာပါသူ တွေကိုလည်း ၀ိုင်းဝန်းကူညီတဲ့ အနေနဲ့ စာမူတွေ ဇန်န၀ါရီ (၁၀)ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီး ပေးပို့ကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ စာမူတွေကို အရင်က ၀င်းဖောင့်နဲ့သာ ပေးပို့နိုင်ကြပေမယ့် အခုတော့ ဘလော့ဂ်ရေးသူ၊ ဖတ်သူတွေ များလာတာနဲ့အမျှ မြန်မာဘလော့ဂ်တွေ အားလုံးလိုလိုမှာ သုံးနေကြတဲ့ ဇော်ဂျီဖောင့်နဲ့လည်း ပေးပို့နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ စာမူတွေကို ပေးပို့ရမယ့် လိပ်စာကတော့ thanlwinainmat@gmail.com ပါ။
ဆိုတော့ကာ … ဇန်န၀ါရီလရဲ့ ညတစ်ညမှာ စာပေကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့ စာဖတ်သူတွေရဲ့ ရှေ့မှောက်ကို သံလွင်အိပ်မက် အရောက်လာခဲ့ပြီး … စိတ်အာဟာရတွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း … မသိသေးသူတွေကိုလဲ သတင်းကောင်းလေးပါးလိုက်ကြပါဦးဗျာ …။
ရေးသားသူ - NayPhoneLatt at Sunday, December 30, 2007 No comments:
ကျွန်တော်ပြောဖြစ်ခဲ့တဲ့ လီဗာပူးအသင်းအကြောင်း ...
ကျွန်တော်က ဘောလုံးကစားခြင်းနဲ့ ဘောလုံးပွဲကြည့်ခြင်းကို စိတ်ဝင်စားတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် ...။ ဘောလုံးကန်တာဆိုရင် ဘယ်အသင်းကန်ကန်ကြိုက်ပါတယ် ...။ မြို့ထဲသွားတဲ့အခါ စိန်ပေါကျောင်းကွင်းမှာ ကလေးတွေကန်နေကြရင်တောင် ကျွန်တော်ရပ်ရပ်ကြည့်တတ်ပါတယ် ...။ ဘယ်အသင်း ကန်ကန်ကြိုက်တယ်ဆို ပေမယ့် ကျွန်တော်တကယ်တမ်းအားပေးတဲ့အသင်းကတော့ နိုင်ငံအသင်းဆို အင်္ဂလန် ၊ ကလပ်အသင်းဆို လီဗာပူးပါ ...။ မြန်မာအသင်းကတော့ ကိုယ့်နိုင်ငံအသင်းဖြစ်တဲ့ အတွက် ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာရှိပြီးသားဆိုတာကို အထွေအထူး ထည့်ပြောမနေတော့ပါဘူး ...။ အဲဒီ့လိုနဲ့ လီဗာပူးကြိုက်တဲ့ကျွန်တော် လီဗာပူးချစ်သူတွေ စုလုပ်ထားတဲ့ ၀က်ပ်ဆိုဒ်လေး ကို ညီငယ်မိုးဝေ ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုကနေတဆင့် ရောက်ခဲ့ပါတယ် ...။ အဲဒီ့လိုနဲ့ လီဗာပူးချစ်သူတွေအချင်းချင်း ဘောလုံးစုကန်ကြတဲ့အခါမှာလဲ အားရင်အားသလို သွားကစားခဲ့ပါတယ် ...။ အခု သူတို့က သူတို့ရဲ့ ၀က်ပ်ဆိုဒ်လေးမှာထည့်ဖို့ အင်တာဗျူးလေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုတာနဲ့ ... သူတို့မေးတာလေးတွေ ဖြေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်...။ ကျွန်တော်နဲ့ lfc4myanmar တို့ရဲ့ အင်တာဗျူးလေးကို ဒီနေရာလေးမှာ သွားဖတ်လိုက်ကြဦးနော် ...။
ရေးသားသူ - NayPhoneLatt at Saturday, December 29, 2007 1 comment:
ကျွန်တော် (သို့မဟုတ်) အနုပညာကိုစွဲလမ်းသူ
လူတိုင်း လူတိုင်းဟာ တစ်ခုခုကိုစွဲလမ်းပြီး တစ်ယောက်တစ်မျိုးစီ ရူးသွပ်နေကြတယ် ...။ အဲဒီ့လို လူများစွာထဲမှာမှ ကျွန်တော်က အနုပညာကို ရူးသွပ်တဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ပါ ...။ အနုပညာကိုချစ်တယ် ၊ အနုပညာကိုမြတ်နိုးတယ်၊ အနုပညာနဲ့နေနေရရင် ကျွန်တော်ပျော်တယ် ...။ ကျွန်တော့်ဘ၀ရဲ့ အပျော်ဆုံးအချိန်တွေ အကြောင်းကို ပြောပါဆိုရင် ... အနုပညာပစ္စည်းတစ်ခုကို ဖန်တီးနေရတဲ့အချိန် ဒါမှမဟုတ် ကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတဲ့အနုပညာ ပစ္စည်းတစ်ခုကို ပြန်လည်ခံစားနေရတဲ့ အချိန်တွေအကြောင်းကိုပြောရမှာပဲ ...။ ကျွန်တော်ဟာ အချိန်တိုင်းအပြစ်ကင်းစင်တဲ့ လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်လိမ့်မယ် ...။ ကျွန်တော်ဟာ ပုထုဇဉ်ပီပီ မှားယွင်းမှုတွေနဲ့လဲ ကင်းချင်မှကင်းလိမ့်မယ် ...။ ဒါပေမယ့် ... သေချာတာတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင် အနုပညာတစ်ခုကို ဖန်တီးနေရတဲ့အချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့စိတ်သဏ္ဍာန်ဟာ ဖြူစင်ရှင်းသန့်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော် အာမခံလို့ရတယ် ...။ ကျွန်တော်ဖန်တီးလိုက်တဲ့ အနုပညာပစ္စည်းတစ်ခုရဲ့ သန့်စင်မှုကိုလဲ ကျွန်တော် အာမခံလို့ရတယ် ...။
ကျွန်တော်ဘာဖြစ်ချင်လဲ ...။ မေးသူတွေများသလို ကျွန်တော့်ရဲ့ အဖြေတွေဟာလဲ တခါကေ၀၀ါးခဲ့ဖူးတယ် ...။ ဘာဖြစ်ချင်တာမှန်းလဲ ကို မသိရလောက်အောင် ကျွန်တော် ဗျာများနေခဲ့ဖူးတယ် ...။ အဲဒီ့အချိန်တုန်းက ရွေးချယ်လို့ရတဲ့ လမ်းကြောင်းတွေထဲမှာ ကျွန်တော်လျှောက်ချင်တာ တစ်ခုမှမပါတာကြောင့်လဲဖြစ်နိုင်တယ် ...။ အခုတော့သေချာခဲ့ပါပြီ ... အသက်နဲ့ခန္ဓာမြဲနေသရွေ့ ကျွန်တော့်အနားမှာအမြဲရှိနေပေးမယ့် ... အနုပညာ ဆိုတဲ့ သက်မဲ့အရာတစ်ခုနဲ့ ကျွန်တော် အမြဲတမ်းအတူနေသွားတော့မယ်လို့ ...။ အဲဒီ့လိုနဲ့ ကျွန်တော် အနုပညာဆိုတာကို စွဲလမ်းခဲ့တယ် ... ရူးသွပ်ခဲ့တယ် ...။ အခြားအရာတွေကို စွဲလမ်းတာထက် စာရင်တော့ ကျွန်တော့်ရဲ့စွဲလမ်းမှုက သန့်စင်ပါတယ် ...။
လူတစ်ယောက်ကို စွဲစွဲလမ်းလမ်းနဲ့ချစ်ခဲ့ဖူးပါတယ် ...။ မေတ္တာတရားကို အခြေခံပြီး သန့်သန့်စင်စင်၊ အနှောင်အဖွဲ့ကင်းကင်း မချစ်နိုင်ခဲ့တော့လဲ ... စိတ်ထဲမှာ အရမ်းကို ပင်ပန်းရပါတယ် ...။ အတ္တစိတ်ကို အခြေတည်ပြီးဖြစ်လာတဲ့ သ၀န်တိုမှုတွေ၊ စိတ်မချမှုတွေ၊ မယုံကြည်မှုတွေက ... ရင်ဘတ်ရဲ့ ဘယ်ဘက်အခြမ်းထဲကနေ တဆစ်ဆစ်နာလာတဲ့အထိ စိတ်အာရုံတွေကို လာလာငြိတယ် ...။ ရုပ်အဆင်း၊ အသံ၊ အနံ့၊ အရသာ၊ အတွေ့ ဆိုတဲ့ အာရုံငါးပါးထက်ပိုတဲ့ ... အာရုံအပြားပြားရဲ့ ငြိတွယ်ချုပ်ချယ်မှုမှာ ... ရင်ခုန်သံတွေ မသဲမကွဲ ၊ စိတ်ဓါတ်တွေ အလူးအလဲနဲ့ ... နှလုံးသားတွေကိုက်ခဲခဲ့ဖူးတယ် ...။ ကျွန်တော်က စိတ်ပျော့တဲ့သူတစ်ယောက်ပါ ... စိတ်ကိုလာထိသမျှတွေက ရင်ထဲအထိ လာလာငြိတတ်လွန်းလို့ ... သူများ တွေ အတွက် ဘာမှမဟုတ်တဲ့အရာလေးတွေက ကျွန်တော့်အတွက် ကြီးကျယ်ခမ်းနားသွားတတ်တာ ... ပြဿနာပါ ...။ ကျွန်တော်က ကျွန်တော်ချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင် ... အရမ်းကို ထိလွယ်ရှလွယ်ပါတယ် ...။ ကျွန်တော်ချစ်တဲ့သူတစ်ယောက်ယောက်က ကျွန်တော့်ကို လေသံမာမာနဲ့ စကားပြောရင်တောင် ကျွန်တော်ဝမ်းနည်းပြီး မျက်ရည်ဝဲတတ်ပါတယ် ...။ အခုအချိန်အထိပါ ...။ ရန်သူက ရှေ့တည့်တည့်ကနေ ပစ်သွားတဲ့ ကျည်ဆန်တစ်တောင့်ထက် ကို့ဘေးနားမှာ ပုခုံးချင်းဖက်ထားတဲ့ ချစ်ရသူတစ်ယောက် ကပ်ပြီးထိုးမယ့် ဓားတစ်ချောင်းက ပိုပြီးကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ် ...။ ကျွန်တော်ကချစ်သလို ကျွန်တော့်ကိုလဲ ချစ်တဲ့သူတွေကတော့ ... ကျွန်တော့်ကို စိတ်ညစ်အောင်မလုပ်ပါဘူး ...။ ကျွန်တော့်ဘ၀မှာ ကျွန်တော့်အဖေနဲ့ အမေကို ကျွန်တော်အချစ်ဆုံးပါ ...။ သမီးမိန်းကလေးတစ်ယောက်လို ပွတ်သီးပွတ်သတ်နဲ့ စကားတွေတီတီတာတာပြောပြီး ချွဲနွဲ့နေတာမျိုးမဟုတ်ပေမယ့် ... အဖေ၊ အမေတို့ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ စိတ်က ကျွန်တော့်အတွက် သိပ်ကိုအရေးကြီးပါတယ် ... ကျွန်တော့်ဘ၀အတွက် လုံခြုံမှုကိုလဲ ခံစားရပါတယ် ...။ အဖေနဲ့ အမေရဲ့ ကျွန်တော့်အပေါ်ထားတဲ့ မေတ္တာကို ကျွန်တော် အကြွင်းမဲ့ယုံတယ် ...။ အဖေဆို ကျွန်တော့်ကို ဆူရင်တောင် ညှိုးသွားမယ့် ကျွန်တော့်မျက်နှာကို မကြည့်ရက်လို့ မြန်မြန်မြန်မြန်ဆူပြီး အမြန်ပဲမျက်နှာလွှဲ သွားတတ်ပါတယ် ...။ လူတစ်ယောက်ကို တကယ်ချစ်တဲ့သူဟာ ကိုယ့်စိတ်သက်သာရာရရေး အတွက် ကိုချစ်တဲ့သူကိုစိတ်ညစ်အောင် လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ ကျွန်တော်ယုံကြည်ထားပါတယ် ...။ မိဘနဲ့ သားသမီးကြားမှာရှိတဲ့ သန့်စင်တဲ့ မေတ္တာတရားမျိုးမဟုတ်ပဲ ... အတ္တမာနတွေစိမ့်ဝင်နေတဲ့ ချစ်ခြင်းနဲ့ လူတစ်ယောက်ကို စွဲလမ်းရတာ ... ရင်ထဲကလဲနာသလို ၊ စိတ်လဲပင်ပန်းပါတယ် ...။
သက်မဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့ အချို့သော စိတ်ဖျော်ဖြေရာတွေကိုလဲ စွဲလမ်းဖူးပါတယ် ...။ အဓိကကတော့ ဘီယာပါ ...။ ရင်ထဲမှာပြည့်ကျပ်နေတဲ့ အချို့သောစိတ်ခံစားမှုတွေကို ပေါ့သွားအောင် ဖွင့်ထုတ်ချင်တဲ့ အခါမှာ ... သာမာန်အချိန်မှာဆိုရင် ပြောသင့်သလား၊ မပြောသင့်ဘူးလား၊ ပြောလို့ကောင်းပါ့မလား စတာတွေကို စဉ်းစားနေတာနဲ့ပဲ မွန်းကျပ်မှုက ပိုပိုတိုးလာတတ်ပါတယ် ...။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော် တခါတရံမှာ ဘီယာသောက်တတ်ပါတယ် ...။ အများစုကတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပါ ...။ ဘီယာငါးခွက်လောက် ၀င်သွားပြီဆိုတာနဲ့ နဲနဲလေးရီဝေေ၀ဖြစ်လာပြီး အာသွက်လျှာသွက်ဖြစ်လာပါတယ် ...။ ထန်းရည်မူး ကျွဲခိုးပေါ်ဆိုသလိုပါပဲ ... ရင်ထဲမှာ ဘာမှမကျန်တော့တဲ့ အထိ ပြောလို့ထွက်သွားပါတယ် ...။ ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေချည်းပဲ ရှိတာဆိုရင်တော့ သိပ်ပြဿနာမရှိပေမယ့် ... အခြားသူတွေပါလာရင်တော့ မကောင်းပါဘူး ...။ နောက်ပြီး ကျွန်တော်က ဘီယာသောက်ပြီးရင် နောက်နေ့မနက်ဆို ခေါင်းကိုက်တတ်ပါတယ် ...။ နေ့တစ်ဝက်လောက် အိပ်နေရပြီး ... တကယ်ကို အလုပ်ပျက်ပါတယ် ...။ ဒီစွဲလမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေက ကိုယ့်ကို ထိခိုက်နိုင်သလို ၊ အခြားသူတစ်ယောက်ယောက်ကိုလဲ ထိခိုက်သွားနိုင်ပါတယ်။ အချို့တွေ ဆေးလိပ်စွဲကြပါတယ် ... ဒါကလည်း မကောင်းတဲ့ အကျိုးဆက်တွေကို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ စွဲလမ်းမှုပါပဲ ...။ ဒါပေမယ့် အချို့သော အရက်သမားတွေ ပြောကြတဲ့ မိန်းမတွေ အရက်လောက်တောင် သစ္စာမရှိဘူးဆိုတဲ့ စကားအတိုင်းပဲ လူတစ်ယောက်ကို စွဲလမ်းတာထက်စာရင်တော့ သက်မဲ့အရာတွေကိုစွဲလမ်းရတာ နဲနဲတော့စိတ်သက်သာရာရပါတယ် ...။
ကျွန်တော် အနုပညာကိုချစ်မြတ်နိုးတယ် ...၊ အနုပညာကို ရူးသွပ်စွဲလမ်းတယ် ...၊ ကျွန်တော့်အမြင်တော့ ... အနုပညာကိုစွဲလမ်းခြင်းဟာ အခြားသောအရာတွေကိုစွဲလမ်းခြင်းထက် ပိုပြီး သန့်စင်တယ်လို့ မြင်ပါတယ် ...။ တခါတရံမှာ ကိုယ်ဖန်တီးလိုက်တဲ့ အနုပညာလက်ရာတစ်ခုက အခြားသူတစ်ယောက်အတွက် အဆိပ်အတောက် တစ်ခုလိုဖြစ်သွားနိုင်ပေမယ့် ... ဒါဟာလဲ အနုပညာကိုခံစားသူရဲ့ ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်နဲ့သာ ဆိုင်သွားပါတယ် ...။ ကျွန်တော်ကတော့ အထက်မှာပြောခဲ့သလိုပဲ အနုပညာပစ္စည်းတစ်ခုကို ဖန်တီးနေတဲ့ အချိန်မှာ စိတ်ကို အသန့်စင်ဆုံးထားပြီး ... ကျွန်တော်ဖန်တီးတဲ့ အနုပညာအတွက် ကျွန်တော်ကို ကျွန်တော် ယုံကြည်စိတ်ချမှုတစ်ခုဖြစ်နေအောင်တည်ဆောက်ပါတယ် ...။ ကျွန်တော်စိတ်တိုနေရင် စာမရေးပါဘူး ... ဒေါသထွက်နေရင် စာမရေးပါဘူး ...။ မလုပ်ခင် အရင်စဉ်းစားဆိုတဲ့စကားအတိုင်း ... တိုးတက်လာတဲ့ခေတ်ကြီးထဲမှာ ကျွန်တော်ကတော့ Enter မခေါက်ခင်တိုင်း ကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့စာတွေအတွက် ကျွန်တော် အမြဲတမ်းပြန်စဉ်းစားပါတယ် ...။ Think again before hitting Enter ... ပေါ့ဗျာ ...။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်ကတော့ အနုပညာကိုချစ်ပါတယ် ... ၊ ကျွန်တော့်ရဲ့ အသက်ခန္ဓာမြဲနေသရွေ့ သန့်စင်တဲ့ ဖြစ်တည်မှုတစ်ခုနဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ အနားမှာရှိနေပေးနိုင်မယ့်အရာဟာ အနုပညာဖြစ်တယ်လို့လဲ ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ် ...။ အဲဒီ့တော့ ကျွန်တော် ... အနုပညာနဲ့ပဲ ပျော်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါတော့မယ် ...။
ရေးသားသူ - NayPhoneLatt at Friday, December 28, 20072comments:
မိမိနဲ့ ငါ ခဏခဏရန်ဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဦးကြီး ...
ဒီနေ့ဟာ ... သိပ်ပြီးတော့ ချစ်ခင်စည်းလုံးကြတဲ့ ကျွန်တော်တို့ မိသားစုရဲ့ ဘ၀ထဲကနေ တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူ အပြီးအပိုင်ထွက်ခွာသွားတဲ့နေ့တစ်နေ့ပါ ...။ ၇နှစ်ရှိခဲ့ပါပြီ ...။ တခုတ်တရကြီး သတိရနေတာမျိုးမဟုတ်ပေမယ့် ... ကျွန်တော် မမေ့ခဲ့တာ သေချာပါတယ် ...။ သူဟာ ကျွန်တော်တို့ မိသားစုထဲက အနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပထမဆုံးမျိုးဆက်လို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး ...။ သူကတော့ ကျွန်တော်တို့ မောင်နှမတွေအားလုံး ဦးကြီးလို့ခေါ်ကြတဲ့ အဖိုးအဖွားတို့ရဲ့ သားကြီး အမေတို့ အဒေါ်တို့ရဲ့ အစ်ကိုအကြီးဆုံး ဦးမျိုးညွှန့် (မျိုးရာဇာညွှန့်) ပါ ...။ ကျွန်တော်မှတ်မိသလောက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မိသားစုထဲမှာ ကျွန်တော့်ဦးကြီးရဲ့ အရင် ဘယ်သူမှ အနုပညာဆိုတာကို သိပ်ပြီးဝါသနာမပါခဲ့သလို ... လေးလေးနက်နက်လဲ မရှိခဲ့ဘူးထင်ပါတယ် ...။ ဦးကြီးက ဦးမင်းလူတို့နဲ့ သူငယ်ချင်းတွေပါ ...။ တက္ကသိုလ် တက်ကြတုန်းက သူတို့သူငယ်ချင်းတစ်စု စုပြီးထုတ်ကြတဲ့ ကဗျာစာအုပ်လေးတွေကို ကျွန်တော် ဖတ်ဖူးပါတယ် ...။ ဦးကြီးက အဲဒီ့တုန်းက မျိုးရာဇာညွန့်ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ ကဗျာတွေရေးပါတယ် ...။ ဒါကတော့ ဦးကြီးတို့ ငယ်ငယ်က ထုတ်ခဲ့တဲ့ ကဗျာစာအုပ်လေးထဲက ဦးကြီးရဲ့ လက်ရာတစ်ခုပါ ...။
`မေတ္တာ´ဖြင့် ကူညီကြပါရန်။ ။
ကျွန်တော့် ဦးကြီးဟာ အနုပညာနဲ့ပတ်သက်လာရင် စိတ်ကူးစိတ်သန်းအရမ်းကောင်းပြီး “ဇ ရှိတယ်ဆိုတာကို ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်တောင် မှန်းဆနိုင်ခဲ့ပါတယ် ...။ သူ့အခန်းလေးမှာ ဆိုရင် စွန့်ပစ်ရမယ့် ပစ္စည်းအတိုအထွာလေးတွေကို ပေါင်းစပ်ပြီးလုပ်ထားတဲ့ အရုပ်ကလေးတွေရှိပါတယ် ...။ နောက်ပြီး ... လက်ရေးကို စတိုင်အမျိုးမျိုးနဲ့ထွင်ရေးထားတဲ့ သီချင်းစာအုပ်ကြီးတစ်အုပ်လဲ ရှိပါတယ် ...။ ဦးကြီးက ဂစ်တာတီးလဲ ကောင်းပါတယ် ...။ သူကြိုက်တဲ့သီချင်းတွေကို စာအုပ်ကြီးတစ်အုပ်ထဲမှာ လက်ရေးလှလှနဲ့ ပြန်ကူးထည့်ထားတတ်ပါတယ် ...။ ကျွန်တော်တို့ ဂစ်တာစတီးတတ်စအရွယ်က ဦးကြီးရဲ့ အဲဒီ့ စာအုပ်ကြီးနဲ့ လေ့ကျင့်ခဲ့ကြရတာလေ ...။ ဦးကြီးက ကျွန်တော့်ကို ဟိုလိုလုပ် ဒီလိုလုပ်ဆိုတာမျိုးသင်မပေးပေမယ့် ... အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ရင် ဦးကြီးက ကျွန်တော့်ရဲ့ စံပြပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ...။ ဦးကြီးဟာ ကျွန်တော့်ကို အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အများကြီး နည်းပေးလမ်းပြလုပ်ခဲ့သလို ... ဘ၀နဲ့ပတ်သက်တဲ့ သင်ခန်းစာတွေ တပုံတခေါင်းကိုလဲ သူ့အသက်နဲ့ရင်းပြီး ပေးခဲ့ပါတယ် ...။
ကျွန်တော် ဦးကြီးရဲ့ ဘ၀အကြောင်းကို နဲနဲလောက်ပြောပြချင်ပါတယ် ...။ ကျွန်တော် အထက်မှာပြောခဲ့သလိုပဲ ကျွန်တော့်ဦးကြီးဟာ အနုပညာကို ကိုယ်တိုင်ကလည်း ၀ါသနာပါ ... အနုပညာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ “ဇ လဲ ရှိပေမယ့် ... ဘာကြောင့်များ အောင်မြင်တဲ့ အနုပညာသမား တစ်ယောက်အဖြစ်ကို မရောက်ခဲ့သလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ကျွန်တော် ဦးကြီး အကြောင်းကို စဉ်းစားမိတိုင်း အဖြေရှာကြည့်ခဲ့ဖူး ပါတယ် ...။
ကျွန်တော် တခါက ကဗျာစာအုပ်လေးတစ်အုပ်မှာ ဒီလိုရေးခဲ့ဖူးပါတယ် ...။
“အနုပညာသမားတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ဟာ နူးညံ့သိမ်မွေ့တယ် ... ဒါပေမယ့် အဲဒီ့နူးညံ့သိမ်မွေ့မှုဟာ ပျော့ညံ့မှုအသွင်ကို ပြောင်းမသွားဖို့တော့ အရေးကြီးတယ် ”လို့ ...
ဒီ ဒဿန ကို သင်ကြားပေးခဲ့တာ ကျွန်တော့်ရဲ့ဦးကြီးပေါ့ ...။ သူက အရမ်းအားနာတတ်တယ် ...။ သူတပါးရဲ့ ဆန္ဒကို ငြင်းဆန်လိုက်ဖို့ အရမ်းဝန်လေးတတ်တယ် ...။ သူ့ရဲ့နူးညံ့သိမ်မွေ့မှုက ပျော့ညံ့မှုအသွင်ကို ပြောင်းသွားတယ်လို့ ကျွန်တော်မြင်မိတယ် ...။ ဦးကြီးဟာ အနုပညာကို အရမ်းဝါသနာပါပေမယ့် မိဘတွေဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့အဖိုးနဲ့အဖွားက လုံးဝကိုအားမပေးခဲ့ဘူး ...။ အဖိုးတို့အဖွားတို့က စာရေးဆရာလို့ဆိုရင် စီးကရက်လေးလက်ကြားညှပ်၊ လွယ်အိတ်ကလေးလွယ်ပြီး လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ အာပေါင်အာရင်းသန်သန်နဲ့ စကားတွေဖောင်ဖွဲ့နေတဲ့လူစားမျိုးလို့ပဲ မြင်ကြတယ် ...။ ခေတ်ကာလကလည်း အဲဒီ့အတိုင်းကို ဖြစ်နေတဲ့ ခေတ်ပေါ့ ...။ အဲဒီ့တော့လဲ အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပါရမီရှင်ဖြစ်လာရမယ့် ဦးကြီးဟာ ၀ါသနာရှင်အဆင့်မှာပဲရပ်ပြီး ... မိဘတွေရဲ့သဘောအတိုင်း ... အနုပညာနဲ့မပတ်သက်တဲ့ အခြားသော အလုပ်တွေကိုပဲလုပ်ခဲ့ရတယ် ...။ အဲ ... အနုပညာနဲ့နီးစပ်တာဆိုလို့ စာပုံနှိပ်စက်တစ်ခုတော့ လုပ်ခဲ့ဖူးတယ် ... ဒါပေမယ့် အဲဒီ့တုန်းကလဲ မအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။ ကျွန်တော့်အထင်တော့ “လုပ်ချင်တာတွေလုပ်နိုင်ဖို့ လုပ်သင့်တာအချို့ကို အရင်ဆုံးလုပ်ရမယ်” ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးကို ဦးကြီး မတွေးခဲ့မိဘူးလို့ စဉ်းစားမိတယ်။ အဲဒါကြောင့်လဲ ... သူဝါသနာမပါပဲ လုပ်ခဲ့တဲ့ အလုပ်တွေ ဘာတစ်ခုမှ မဖြစ်မြောက်ခဲ့တာပေါ့ ...။
“အခြေအနေအရ အခွင့်အရေးမပေးသေးတဲ့ အခါမှ ကိုတကယ်လုပ်ချင်နေတာတွေကို ခဏဘေးဖယ် ထားပြီး လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာတွေကို သေသေချာချာလုပ်ဖို့ လိုတယ်၊ နောက် ... ကို့ရဲ့ တကယ့်ယုံကြည်ချက်ကို မပျောက်ပျက်အောင်ထိန်းသိမ်းပြီး လုပ်ခွင့်ရမယ့် အခွင့်အရေးတွေကို မျက်ခြေမပျက် စောင့်ကြည့်နေရမယ် ... အခွင့်အရေးရတာနဲ့ ကိုလုပ်ချင်တာတွေကို နဲနဲချင်းလုပ်ယူသွားရမယ် ”
အဲဒီ့ ဒဿနကိုလဲ ဦးကြီးက ကျွန်တော့်ကို သင်ပေးခဲ့တာပဲ ...။ ဦးကြီးရဲ့ အမျိုးသမီးကလည်း ဦးကြီးရဲ့ စိတ်ကို နားမလည်ဘူးလို့ပြောလို့ရတယ် ...။ နောက်ပိုင်းမှာ ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ မိဘတွေနဲ့ ဇနီးရဲ့ အလိုကိုလိုက်ပြီး ဦးကြီးက သူ့ရဲ့ ယုံကြည်ချက်တွေ၊ သူ့ရဲ့ဝါသနာတွေ၊ သူရင်ခုန်ရူးသွတ်တာတွေ အားလုံးကို စွန့်လွှတ်လိုက်တယ် ...။ ကိုယ် ယုံကြည်ရာပန်းတိုင်တစ်ခုကို ကို ယုံကြည်ရာလမ်းကြောင်းကနေ လျှောက်နေတာမျိုး မဟုတ်တော့ပဲ သူများအလိုကျနေနေရတဲ့ ဘ၀ဖြစ်သွားတယ် ...။ သူ ... ဘယ်ပျော်မလဲ ...။ ကျွန်တော် ခံစားလို့ရတယ် ...။ မိဘတွေလွှတ်၊ ဇနီးကလည်း အားပေးလို့ နိုင်ငံခြားကို မသွားချင်ပဲ သူသွားခဲ့တယ်။ စာရေးနေရမယ့်လက်တွေ၊ ဂစ်တာတီးနေရတဲ့လက်တွေ၊ အနုပညာပစ္စည်းတွေကို ဖန်တီးနေရမယ့် လက်တွေက ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောကြီးရဲ့ ၀မ်းဗိုက်ထဲက ဓါတုဗေဒဆေးရည်တွေနဲ့ မိတ်ဖွဲ့နေရတယ်။ ဆိုးတာက သူ ... အနုပညာအလုပ်တွေကို မရရတဲ့အချိန်မှာ ဆက်လုပ်နေသင့်ပေမယ့် မလုပ်ပဲ အရက်ပဲလှိမ့်သောက်နေတာပဲ ...။ အဲဒါနဲ့ သူ တဖြေးဖြေး အရက်စွဲလာခဲ့တယ် ...။ အဲဒီ့လိုနဲ့ ရန်ကုန်ပြန်လာတယ် ... အိမ်ထောင်ရေး အဆင်မပြေဘူး ...။ အရက်တွေပဲလှိမ့်သောက်တယ် ...။ အဲဒီ့လိုနဲ့ ... သူ့ရဲ့သွေးတွေဟာ အယ်လကိုဟော (Alcohol) အငွေ့မပါပဲ မလည်ပတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ အဆင့်ကို ရောက်သွားတယ် ...။ အရက်ဖြတ်ဖို့ နည်းမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားကြပေမယ့် ... မအောင်မြင်ခဲ့ဘူး ...။ အရက်က သူ့ကိုနိုင်သွားပြီ ...။ သက်မဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ အရက်က သက်ရှိလူသားတစ်ယောက်ရဲ့ဘ၀ကို ဟိုးချောက်နက်နက်ထဲ ဆွဲချသွားတယ် ...။ အားလုံးကတော့ ပြောကြတယ် ... ဦးကြီးက အရက်ကြောင့်သေရတယ်တဲ့ ...။ ကျွန်တော်ကတော့ မထင်ဘူး ... အရက်တစ်ခုတည်းကြောင့်တော့ မဟုတ်ဘူး ... ... ... ... ။
“ လုပ်ချင်တာတစ်ခုနဲ့လုပ်သင့်တာတစ်ခု တစ်ခုခုကိုပဲ မဖြစ်မနေရွေးချယ်ရတော့မယ်ဆိုရင်တော့ ... လုပ်ချင်တာတွေကိုသာလုပ်လိုက်ပါ ... ခဏလေးရတဲ့လူ့ဘ၀တစ်ခုကို ဘာဖြစ်လို့ စိတ်ညစ်ခံနေပြီး ကုန်ဆုံးမှာလဲဗျာ ...”
ကျွန်တော့်ကို ဦးကြီး ဘ၀နဲ့ရင်းပြီး ပေးခဲ့တဲ့ သင်ခန်းစာတွေ ၊ ဒဿနတွေအများကြီးပါ ...။ အဲဒီ့သင်ခန်းစာတွေ အဲဒီ့ ဒဿနတွေနဲ့ ကျွန်တော်ကတော့ အခုအချိန်အထိ လုပ်သင့်တာလေးတွေနဲ့ လုပ်ချင်တာလေးတွေကို ... ပါးပါးနပ်နပ်နဲ့ ပိုင်းခြားပြီးလုပ်နေနိုင်တုန်းပါ ...။ ဒါပေမယ့် ဦးကြီးပေးခဲ့တဲ့ သင်ခန်းစာတွေကို ကျွန်တော်အမှန်တကယ်ကျေညက်ရဲ့လားဆိုတာကိုတော့ ကျန်သေးတဲ့ ဘ၀တစ်လျှောက်လုံးစာ ကျွန်တော့်ကို ကျွန်တော့် စောင့်ကြည့်ရပါဦးမယ် ...။ သေချာတာတစ်ခုကတော့ ဘယ်သူကမှ အနုပညာကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့စိတ်တွေကို ချွေးသိပ်လို့မရနိုင်ဘူး ဆိုတာပါပဲ ...။ ဦးကြီး ကောင်းရာသုဂတိမှာ သူချစ်မြတ်နိုးတဲ့ အနုပညာနဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပေါင်းဖက်နိုင်ပါစေ ဗျာ ...။
PS - ကျွန်တော်တို့မိသားစုကို ခွဲခွာသွားတာ ၇နှစ်ရှိသွားပြီဖြစ်တဲ့ ဦးကြီးကို ရည်စူးပြီး ဒီစာစုလေးကို ရေးပါတယ် ...။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဦးကြီးရေးခဲ့တဲ့ မိမိနဲ့ငါရန်ဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့ ကဗျာခေါင်းစဉ်လေးကို ဒီပို့စ်လေးရဲ့ ခေါင်းစဉ်မှာ ယူသုံးထားပါတယ် ...။ ကျွန်တော်သိပ်ကြိုက်ခဲ့တဲ့ အဲဒီ့ကဗျာလေးကို ကျွန်တော်ရန်ကုန်ပြန်ရောက်တဲ့အခါ ပြန်ရှာပြီးတင်ပေးပါဦးမယ် ...။
ရေးသားသူ - NayPhoneLatt at Thursday, December 27, 2007 11 comments:
ကျွန်တော်နှင့် အိပ်မက်များ ...(၂)
ကျွန်တော် တစ်ယောက်တည်း လမ်းပေါ်မှာ လမ်းလျှောက်နေတယ် …။ လျှောက်နေရင်းနဲ့ ကိုယ်နဲ့ အတူကောက်ယူလို့ရတဲ့ အချို့အရာလေးတွေကို တပါတည်းကောက်ယူသယ်ဆောင်လာမိတယ်။ အဲဒီ့လိုနဲ့ လျှောက်နေရင်း လျှောက်နေရင်း ကျွန်တော့်ရဲ့ ခြေထောက်တွေက မြေကြီးနဲ့ တဖြေးဖြေးလွတ်လွတ်လာတယ် …။ တစ်လှမ်းပြီး တစ်လှမ်း လှမ်းနေရင်း မြေကြီးနဲ့ ဝေးဝေးလာလိုက်တာ … ကျွန်တော့်ရဲ့ဘေးဘီဝဲယာမှာ လူတွေ ရှားသထက်ရှားလာတယ်။ တစ်နေရာအရောက်မှာတော့ ကျွန်တော်လှမ်းတွေ့လိုက်ရတယ် … အောင်မြင်မှုလို့ စာတန်းထိုးထားတဲ့ တောင်ကြီးတစ်လုံး … ကျွန်တော်က တောင်ထိပ်နဲ့တော်တော်ကိုနီးနေပြီ … အဲဒီ့တောင်ကြီးပေါ်ကိုကြိုးစားတွယ်တက်နေသူတွေကလည်း အများကြီးပဲ … ။ ကျွန်တော်လဲ ကြုံတုန်းလေးအောင်မြင်မှုနဲ့နီးနီးလေးပဲဆိုပြီး အဲဒီ့တောင်ကြီးပေါ်ကို လှမ်းတက်ဖို့ကြိုးစားလိုက်တယ် …။ မရဘူး …။ ကျွန်တော် ဘယ်လိုမှကိုခြေလှမ်းလို့ မရဘူး …။ အဲဒါနဲ့ တောင်ထိပ်နားရောက်ခါနီးနေတဲ့ သူတစ်ယောက်ကို ကျွန်တော်လှမ်းမေးလိုက်တယ်။ ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ လှမ်းတက်လိုက်လို့မရတာလဲပေါ့ …။ အဲဒီ့တော့ အဲဒီ့သူကဖြေတယ် … ဒီတောင်က အောက်ခြေကစတက်မှရမှာတဲ့ … ။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လဲ အဲဒီ့တောင်ကြီးကို ထားခဲ့ပြီးဆက်လျှောက်လာလိုက်တယ် …။ မြေကြီးနဲ့လွတ်နေတဲ့ ခြေထောက်တွေနဲ့ပေါ့ …။ အဲဒီလိုနဲ့ လမ်းမှာ နောက်ထပ်တောင်တစ်လုံးကို ထပ်တွေ့ပြန်တယ် ...။ အဲဒီ့တောင်ရဲ့ နာမည်က အခွင့်အရေးတဲ့ ...။ အဲဒီ့တောင်ပေါ်ကိုလဲ ကျွန်တော်တက်လို့ မရဘူး ...။ နောက်ထပ် နောက်ထပ် ... တောင်တွေ တောင်တွေများစွာ ကျွန်တော်ထပ်ထပ်တွေ့ပေမယ့် ... မြေကြီးနဲ့လွတ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ခြေထောက်တွေနဲ့ ဘယ်လိုမှကို မနီးစပ်နိုင်ဘူးဖြစ်ဖြစ်နေတယ် ...။ အဲဒီ့လိုနဲ့ ကျွန်တော် အမြင့်တစ်နေရာကို ရောက်နေတာမျိုးမဟုတ်ပဲ … တမြောက်မြောက်ဖြစ်နေခဲ့တာ အိပ်မက်ဆုံးသွားတဲ့ အထိပါပဲ …။
ဒီအိပ်မက်ကတော့ နဲနဲထူးဆန်းတယ် …။ အနက်တစ်ရောင်တည်းနဲ့ ပိန်းပိတ်အောင်မှောင်နေတဲ့ အခန်းတစ်ခန်းထဲကို ကျွန်တော်ရောက်နေတယ် …။ အနက်တစ်ရောင်တည်းကိုပဲ အခါခါမြင်နေရတာ ဘာမှမမြင်ရတာနဲ့ အတူတူပါလားဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ မျက်စိကိုစုံမှိတ်ပြီး ထိုင်နေလိုက်တယ်။ အဲဒီ့အချိန်မှာပဲ … တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့ အခန်းထဲက အသံတစ်သံ လျှံထွက်ကျလာတယ်။ အော်သံ … တိတိကျကျထပ်ပြောရရင် အော်ခေါ်သံ …။ သဲ့သဲ့လေးပေမယ့် ပြတ်ပြတ်သားသားကိုကြားနေရတယ် …။ ကျွန်တော့်ကိုလှမ်းခေါ်နေတာပဲ … လာခဲ့ … ဒီဘက်ကို လာခဲ့တဲ့ …။ ကျွန်တော်ပထမဆုံးသော မျှော်လင့်ချက်တစ်ခုနဲ့ မတ်တပ်ထရပ်လိုက်တယ် …။ ဘာကိုမှမမြင်ရပေမယ့် … ကျွန်တော် အသံလာရာကိုမှန်းဆပြီး ခြေလှမ်းတစ်လှမ်းကို စလှမ်းလိုက်တယ် …။ ပြီးတော့ နောက်တစ်လှမ်း နောက်တစ်လှမ်း … အမှောင်ထဲမှာ လှမ်းရတဲ့ခြေလှမ်းက နဲနဲတော့ ဟိုရမ်းဒီရမ်းဖြစ်နေနိုင်တယ် …။ အဲဒီ့လိုပဲ … မမြင်ရတဲ့ အရာတွေကို တက်တက်နင်းမိလို့လဲ … ခြေဖ၀ါးမှာသွေးစို့သွားတာလဲဖြစ်တယ် …။ ဒါပေမယ့် … ထိုင်နေရတာထက်စာရင် မဖြစ်စလောက်မျှော်လင့်ချက်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်နေရာရာကို ဦးတည်လျှောက်နေရတာက ပိုအဓိပ္ပါယ်ရှိလိမ့်မယ်လို့ … စဉ်းစားမိလိုက်တယ် …။ ကျွန်တော် နဲ့ အသံနဲ့ တဖြည်းဖြည်းနီးလာတယ် … ကျွန်တော်ကလဲ အသံတစ်ခုပေးလိုက်တယ် …။ အသံနှစ်သံ ပေါင်းစုံမိကြတယ် … ပိန်းပိတ်အောင်မှောင်နေတဲ့ အနက်ရောက်ထဲမှာပဲ …။
ရေးသားသူ - NayPhoneLatt at Monday, December 24, 20073comments:
ကျွန်တော်နှင့် အိပ်မက်များ ...(၁)
ကျွန်တော် စင်ကာပူနိုင်ငံကို ခဏရောက်နေတဲ့ အချိန်ဆိုတော့ စင်ကာပူနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းတွေကို
ဖတ်ဖို့စောင့်နေကြသူတွေရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ် ...။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်က အဲဒီ့အကြောင်းတွေကို ရေးဖို့ အာရုံမလာဘူးဖြစ်နေတယ် ...။ ကျွန်တော့် အခု အားလုံးကို ပြောပြချင်တာက ... စင်ကာပူရောက်မှ နေ့စဉ် ရက်ဆက် ကျွန်တော့်ကို နှိပ်စက်တဲ့ အိပ်မက်တွေအကြောင်းပါ ...။ ရန်ကုန်မှာနေတုန်းက ကျွန်တော်အိပ်မက် မမက်တာ ကြာပါပြီ ...။ ဒါပေမယ့် စင်ကာပူကို စရောက်ရောက်ချင်းညမှာပဲ ကျွန်တော် အိပ်မက် စမက်တော့တာပါပဲ ...။
ကျွန်တော် အခန်းကျဉ်းကျဉ်းလေးတစ်ခုထဲကိုရောက်နေတယ် ...။ အခန်းဆိုတာထက် လူတစ်ကိုယ်စာ ကျုံ့ကျုံ့လေးပဲ နေလို့ရတဲ့ မြေကျင်းလေးထဲကို ရောက်နေတယ်လို့ ပြောရင် ပိုမှန်လိမ့်မယ် ...။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်ရဲ့ရှေ့မှာ ၀မ်းလျားထိုးဝင်သွားလို့ ရတဲ့ အပေါက်တစ်ပေါက်တော့ရှိတယ် ... နောက်မှာတော့ ဘာမှမရှိဘူး ... အားလုံး အလုံပိတ်။ ဒီအတိုင်းနေလို့ကတော့ ကျပ်ကျပ်သပ်သပ်နဲ့ စိတ်ကျဉ်းကျပ်ပြီး သေလိမ့်မယ်လို့ တွေးမိတာနဲ့ ရှေ့က လမ်းလေးအတိုင်းပဲ ကျွန်တော် ၀မ်းလျားထိုးဝင်သွားလိုက်တယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ အဲဒီ့လမ်းက တဖြေးဖြေး ပိုပိုပြီးကျဉ်းလာတယ် ...။ အရင်က ကျုံ့ကျုံ့လေးနေခဲ့ရတဲ့ မြေကျင်းလေး ထက်တောင် ပိုကျပ်တည်းတဲ့ အခြေအနေတစ်ခုကို ရောက်လာတယ်။ မှားပြီးထင်တယ်လို့ တွေးမိပြီး ... နောက်ပြန်လှည့်ဖို့ စဉ်းစားလိုက်တယ်။ မသတီစရာကောင်းတဲ့ မြေကျင်းသေးသေးလေးရဲ့ ကျဉ်းကျပ်မှုကို စိတ်ထဲမှာ ပြန်မြင်လာတယ် ...။ အဲဒါနဲ့ မထူးကွာဆိုပြီး ကျဉ်းထဲကျပ်ထဲမှာပဲ ရှေ့ဆက်တိုးဖို့ကြိုးစားတယ် ... ။လမ်းကလဲ ကျဉ်းသထက်ကျဉ်းလာသလို ... မွန်းကျပ်မှုကလဲ ပြင်းသထက်ပြင်းလာတယ် ...။ စိတ်ပျက်အားလျော့စွာနဲ့ မျက်စိကို စုံမှိတ်ပြီး အတင်းစွတ်တိုးလိုက်ချိန်မှာပဲ ... အလင်းတစ်စက မျက်ခွံကို ဖောက်ပြီး အာရုံထဲကိုရောက်လာတယ် ...။ တွေ့ပြီ ... အလင်း ... ၊ အနှစ်နှစ် အလလ ငတ်မွတ်တောင့်တခဲ့ရတဲ့ အလင်း ... အစက်အပျောက်လေးတစ်ခုသာသာပဲရှိတဲ့ အလင်းစက်လေးတစ်ခုက လမ်းရဲ့ အစွန်းတစ်ဖက်ကနေ ကျွန်တော့်ကို လက်ယက်ခေါ်နေတယ် ... နဲနဲတော့ ဝေးလိမ့်ဦးမယ် ...။ အဲဒီ့အလင်းကိုရောက်တဲ့ အထိ သွားလို့ရတဲ့ လမ်း ရှိချင်မှလဲ ရှိလိမ့်မယ် ... ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ ဆက်သွားခဲ့တယ် ...။ အလင်းနဲ့လဲ နီးလာသလို ... ရင်ထဲက ဝေဒနာတွေကလည်း ကြီးကြီးလာတယ် ... မွမ်းကျပ်မှု၊ လှောင်ပိတ်မှု၊ ကျဉ်းမြောင်းမှု၊ အားကိုးရာမဲ့မှု နောက် မျှော်လင့်ချက် ... ။ ကျွန်တော် အိပ်မက်က လန့်နိုးလာခဲ့တယ် ...။
ကျွန်တော် ခုတင်ပေါ်မှာ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ကြီးအိပ်ပျော်နေတုန်း ... ကျွန်တော်ရော ကုတင်ကြီးပါ ... စကြ၀ဠာကြီးထဲကို လွှင့်ပစ်ခံလိုက်ရသလိုမျိုး လွင့်စင်ပြုတ်ကျသွားတယ် ...။ ကျွန်တော် ကြောက်လိုက်တာ ...။ လက်တွေ၊ခြေတွေတင်မကဘူး တစ်ကိုယ်လုံးကလဲ လုံးဝကိုလှုပ်လို့ကို မရဘူး ...။ ကိုကိုယ်တိုင် ပြုတ်ကျနေတာကို ဘာမှမတတ်နိုင်ပဲ ဒီအတိုင်းပဲ ထိုင်ကြည့်နေရတဲ့ အဖြစ်ပါ ... ။ အမြင့်တနေရာကနေ ပြုတ်ကျတာဆိုတော့ ရင်ထဲမှာလဲ အေးနေတာပါပဲ ...။ တဖြေးဖြေးနဲ့ ပြုတ်ကျနေတဲ့ အချိန်ကြာလာတယ် ...။ အောက်ကြမ်းပြင်ကို ထိတဲ့တစ်ချိန်မှာ ကျွန်တော့်အသက်နဲ့ကိုယ် အိုးစားကွဲပြီဆိုတဲ့အသိနဲ့ စိုးထိတ်ကြောက်ရွံ့နေမိတဲ့ စိတ်တွေဟာ တဖြေးဖြေးပါးလျလာတယ် ...။ ပြုတ်ကျလို့ အသဲတအေးအေး ဖြစ်နေတဲ့ ခံစားမှုကလဲ ကြောက်စိတ်တွေမရှိတော့တဲ့နောက် ခံစားလို့ကောင်းတဲ့ အရသာတစ်ခုလို ဖြစ်လာတယ် ...။ ကျွန်တော် တခုခုကိုလဲနားလည်လာတယ် ...။ ဆွဲငင်အားတွေကို သာ လျှစ်လျှူရှုထားနိုင်မယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုပြုတ်ကျမှုမျိုးကမှ ကိုယ့်ကို အထိမနာစေနိုင်ဘူးဆိုတာကို ...။အဲဒါနဲ့ပဲ ကျွန်တော်လဲ ဆွဲငင်အားကင်းကင်းနဲ့ ပြုတ်ကျခြင်းရဲ့ အရသာကို ပျော်ပျော်ကြီးခံစားနေလိုက်တယ် ...။ အိပ်မက်ဆုံးတဲ့ အထိ ကျွန်တော်ကတော့ ပြုတ်ကျနေတုန်းပါပဲ ...။
ကောသလမင်းရဲ့ အိပ်မက်တွေကိုတော့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားက အဓိပ္ပါယ်တွေ ဖွင့်ဆိုပြသွားတယ် ... ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ အိပ်မက်တွေကိုတော့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲ ဘာတွေမှန်းမသိလို့ ခင်ဗျားတို့ဖာသာပဲ လိုသလို တွေးလိုက်ကြတော့ဗျာ ။ နောက်ထပ်အိပ်မက်တွေကို နောက်တော့ ထပ်ပြောပြပါဦးမယ်။
ရေးသားသူ - NayPhoneLatt at Saturday, December 22, 20076comments:
မြစ်တစ်မြစ်ထဲ ရေနှစ်ခါချိုးလို့ မရဘူးတဲ့ …
အဲဒီ့လို … ရူးရူးမိုက်မိုက်ကို ငြိခဲ့တယ် …
ဒီလိုနဲ့ပဲ လင်းရင်းနဲ့လောင် လောင်ရင်းနဲ့လင်းကြ
ပြာမှုန်ပြာစတွေကိုပဲ တိတ်တိတ်လေးလိုက်ရှင်းပေးနေမိတယ် …
အနင်းအဖြတ်ဆိုတာ အားလုံးနဲ့မလွတ်ဘူးတဲ့ …
ဘ၀တွေကို လိုက်ကောက်ဖို့ကြိုးစားနေမိတယ် …
ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုစိတ်ဓါတ်နဲ့ ခရီးဆက်နေကြလဲ …
ပြောင်းလဲခြင်းတွေအပြင် … လွဲချော်မှုတွေကိုပါထပ်မြင်လိုက်တယ် …။ ။
ရေးသားသူ - NayPhoneLatt at Monday, December 10, 20076comments:
ကလေးတွေ ပညာသင်နိုင်ကြစေဖို့ ...
လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ လက်ဖက်ရည်သောက်နေရင်း စားပွဲထိုးလေးနှစ်ယောက်ကို ခေါ်ပြီး အသက်မေးလိုက်တော့ တစ်ယောက်က ၁၆နှစ်၊ နောက်တစ်ယောက်က ၁၃ နှစ်။ ညဘက် လိုင်းကားစီးပြီး အိမ်ကိုပြန်တော့ ၁၀၅ကားပေါ်မှာ ပါးစပ်ကနေ မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်းတွေပြောပြီး စပယ်ယာလုပ်နေတဲ့ကောင်လေးရဲ့ အသက်ကို ခန့်မှန်းကြည့်တော့ အလွန်ဆုံးရှိမှ ၁၄ နှစ်၊ ဟိုနားဒီနားသွားချင်လို့ ဆိုက်ကားငှားမယ်လုပ်တော့ နင်းတဲ့သူက ကလေးဖြစ်နေတာနဲ့ မင်းငါ့ကိုတင်နင်းနိုင်လို့လားလို့မေးတော့ နောက်ထပ်နှစ်ယောက်တောင် ထပ်တင်လို့ ရသေးတယ်တဲ့၊ သူရဲ့အသက်ကလည်း အလွန်ဆုံးရှိမှ ၁၆နှစ်၊ အိမ်မှာ ညနေပိုင်း ကော်ဖီလေးထိုင်သောက်နေတုန်း ... စာအုပ်အဟောင်းတွေဝယ်တယ်၊ ဒန်တွေဝယ်တယ်၊ ကော်တွေဝယ်တယ် ... ဆိုတဲ့ အသံစာစာလေးကိုကြားလို့ လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ... ၁၃နှစ်သာသာ လောက်ပဲရှိဦးမယ့် ကောင်လေးတစ်ယောက် ...။ ဒါတွေဟာ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ တကယ့် အဖြစ်အပျက်တွေပါ ... ။ လူ့လောကကြီးထဲက လက်တွေ့ဘ၀တွေထဲကို ဆင်းပြီး အမြင်အာရုံရှင်းရှင်းနဲ့ ကြည့်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံး မြင်နိုင်တဲ့မြင်ကွင်းတွေလဲဖြစ်ပါတယ် ...။ ဒီကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်အိပ်မက်တွေဟာ ဘာတွေလဲ ...။ ဆရာဝန်ကြီးလား ... မဖြစ်နိုင်ပါဘူး၊ အင်ဂျင်နီယာကြီးလား ... ဒါဟာလဲ တော်တော်ကိုဝေးပါတယ်၊ ဒါဆို အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးလား ... ဟင့်အင်းလို့ပဲဖြေရမှာပါ ...။ ဒါပေမယ့် တစ်ခုတော့ရှိပါတယ် ...။ ဒီကလေးငယ်တွေဟာ အခုအရွယ်ကတည်းက ကျောင်းမနေနိုင်ရှာပဲ မိသားစုရဲ့ စားဝတ်နေရေးအတွက် ရရာအလုပ်ကိုဝင်လုပ်နေကြရပြီဆိုတော့ သူတို့ရဲ့ အနာဂတ်ဟာ ဒီအတိုင်းသာ ဆက်သွားမယ်ဆိုရင် သာမာန် တစ်နေ့လုပ်မှတစ်နေ့စားရတဲ့ ဘ၀တစ်ခုထက်ဘယ်လိုမှ ပိုလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီကလေးငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ဟာ အဲဒါတွေထက်ပိုတဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက် တစ်စုံတစ်ဦး အဖြစ်ကိုရောက်သွားနိုင်ပါတယ် ...။ တစ်ခုတည်းလိုတာပါ ... သူတို့ရဲ့ဘ၀တွေကို ဆွဲတင်ဖို့အားအင်ပြည့်ဝတဲ့ လက်တစ်ဖက်ပဲလိုတာပါ ...။ အဲဒီလက်တစ်ဖက်ဟာ ခင်ဗျားရဲ့လက်ဖြစ်နိုင်သလို၊ ကျွန်တော့်ရဲ့လက်လဲ ဖြစ်နိုင်သလို၊ လူအားလုံးထဲက တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့လက်လဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာ နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်လူငယ်လေးတွေရဲ့ ဘ၀ကို ဆွဲတင်မြင့်မားစေမယ့် လက်တစ်ဖက် ဖြစ်နိုင်ခွင့်တွေရှိနေပါတယ် ...။ အဲဒီ့လိုဖြစ်နိုင်ဖို့ဆိုတာကလည်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာ တစ်ခုတည်း ရှိနေဖို့လိုတာပါ ...။ အဲဒါကတော့ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ပါ ...။
တော်တော်များများကတော့ ကျောင်းတက်ပြီး ပညာရှာမှီးနေရမယ့် အရွယ်မှာ စားဝတ်နေရေးအတွက် အလုပ်လုပ်နေကြရတဲ့ ကလေးငယ်တွေကိုမြင်တဲ့အခါ ဘယ်လိုတွေးကြမယ် ဆိုတာမသိပေမယ့် ... ကျွန်တော်ကတော့ ဒီကလေးတွေရဲ့ဘ၀၊ ဒီကလေးတွေကို ဒီလိုဖြစ်နေစေတဲ့ သူတို့ မိဘတွေရဲ့ဘ၀၊ နောက်ပြီး ဒီကလေးတွေရဲ့အနာဂတ် ... ၊ ဒီလိုကလေးမျိုးတွေလူကြီးဖြစ်လာပြီး တစ်ယောက် တစ်နေရာစီကနေ ၀င်ပါကြမယ့် နိုင်ငံရဲ့ အနာဂတ် ...၊ ပြီးတော့ ဒီကလေးတွေရေးထွင်းရမယ့် ... နိုင်ငံရဲ့သမိုင်း စာမျက်နှာအသစ် တွေ ... စတာ စတာတွေအထိကို အတွေးနယ်ချဲ့ မိပါတယ် ...။ ဒါဟာ ကြီးမားတဲ့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်သလို အချိန်မီပြောင်းပစ်သင့်တဲ့ အခြေအနေတစ်ရပ်ဖြစ်တယ်လို့ လဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ် ...။ ဒါကြောင့်လဲ ... ဒီပြဿနာကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းရင်ကောင်းမလဲဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်ဥာဏ်မီသလောက်လေး အခါခါ စဉ်းစားအဖြေရှာကြည့်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ ဒီကလေးတွေကို ဒီလိုအခြေအနေရောက်လာစေတဲ့ အခြေခံအချက်ကတော့ သူတို့မိဘတွေရဲ့ ဘ၀အခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ်။ မကောင်းမြစ်ထာ၊ ကောင်းရာညွှန်လတ်၊ အတတ်သင်စေ၊ ပေးဝေနှီးရင်း၊ ထိမ်းမြားခြင်းလျှင် ၀တ်ငါးအင်ဆိုတဲ့ မိဘတို့ရဲ့ ၀တ္တရားငါးပါးထဲမှာ တစ်ပါးအပါအ၀င်ဖြစ်ပြီး အရေးအကြီးဆုံး၊ အခြေခံအကျဆုံးဖြစ်တဲ့ အတတ်ပညာသင်ကြားပေးရမယ်ဆိုတဲ့ ၀တ္တရားကို မိဘတွေတော်တော်များများက မကျေပွန်နိုင်ကြတော့တဲ့အချက်ကို သွားတွေ့ရပါတယ် …။ တကယ်တမ်းသေသေချာချာ စဉ်းစားမယ်ဆိုရင် အဲဒီ့ဝတ္တရားငါးပါးထဲက အတတ်သင်စေဆိုတဲ့ ၀တ္တရားတစ်ပါးကိုသာ မိဘတိုင်းကျေနိုင်မယ်ဆိုရင် … အခြားဝတ္တရားတွေကိုပါ အလိုလို ဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်သလိုပါပဲ …။ ပညာရေးကိုဆုံးခန်းတိုင်အောင် သင်ယူနိုင်ခဲ့တဲ့ ကလေးငယ်တစ်ယောက်ဟာ ကောင်းမှုနဲ့ မကောင်းမှုကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ခွဲခြားတတ်သွားပါတယ် …။ နောက်ပြီး … ကိုယ်တတ်တဲ့ ပညာနဲ့ အရင်းအနှီးကို ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေရပ်တည်နိုင်စွမ်းလဲရှိသွားနိုင်ပါတယ် …။ ပညာရေးဆုံးခန်းတိုင်ခဲ့တဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ဟာ အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါ သင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့ အသိတရားရှိနေပြီဖြစ်တာကြောင့် ထိမ်းမြားလက်ထက်မှုတစ်ခုကိုလဲ သူ့ကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်း ရှိသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိဘတွေအနေနဲ့ အခြားဝတ္တရားတွေမကျေချင်နေပါစေ … အတတ်သင်စေဆိုတဲ့ ၀တ္တရားလေးတစ်ခုကိုတော့ တတ်စွမ်းသမျှကျေပွန်အောင် ထမ်းဆောင်သင့်ကြတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ ဒါက ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တဲ့ဆန္ဒပါ …။ ဒါပေမယ့် … တကယ့်လက်တွေ့ဘ၀မှာ ကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတာက ဒီတာဝန်လေးတစ်ခုကိုတောင် မကျေနိုင်ကြတဲ့ မိဘတွေကြောင့် ကလေးငယ်တွေရဲ့ အနာဂတ်တွေ မြှုတ်နှံစတေးပစ်နေရတဲ့ မြင်ကွင်းတွေပါ။ ဘာဖြစ်လို့ ဒီလိုဖြစ်နေတာလဲ ဆိုတာကိုထပ်စဉ်းစား ကြည့်တဲ့အခါမှာ အခြေခံလူတန်းစားအလွှာတွေရဲ့ အသိပညာဗဟုသုတချို့တဲ့မှုကလည်း အကြောင်းရင်းတစ်ခု ဖြစ်နေပြန်တာကို တွေ့ရပါတယ် …။ ကိုယ်မွေးလာမယ့် ကလေးတွေကို တာဝန်ယူနိုင်တဲ့ အခြေအနေ ကိုယ့်မှာ မရှိသေးဘူးဆိုရင် … ကလေးမယူသေးလို့ရပါတယ် …။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ့လို အသိတွေအခြေခံလူတန်းစားအလွှာမှာ ရှိမနေပါဘူး။ စားဝတ်နေရေးအတွက် အချိန်မအားမလပ်အောင်ကို ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေရလို့ ကျန်တာတွေအတွက် ဘယ်လိုမှ စဉ်းစားချိန်မရတာမျိုးလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ပြဿနာရဲ့ အကြောင်းရင်းကို စဉ်းစားကြည့်နေတာဖြစ်ပါတယ် …။ ဟုတ်ပါပြီ … အခု ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး စဉ်းစားကြည့်ပါမယ် …။ အခြေခံလူတန်းစားတွေကို သားစပ်ခြားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အသိတွေကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပေးနိုင်ဖို့လိုပါတယ် …။ နောက်ပြီး … လူတိုင်းရဲ့ အခြေခံစားဝတ်နေရေးပြေလည်နေစေဖို့ကိုလဲ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရပါမယ် …။ ပညာမသင်နိုင်ပဲ အလုပ်ထွက်လုပ်နေရတဲ့ကလေးငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ဘ၀ကို ကယ်တင်ချင်တယ်ဆိုရင် အဲဒီ့ကလေးငယ်ရဲ့ မိသားစုရှိရာကို သွားပြီး အဲဒီ့မိသားစုထဲက မိခင်နဲ့ ဖခင်ကို သားစပ်ခြားရေးအသိပညာတွေပေးရပါမယ် …။ ပြီးရင် အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်တဲ့ ဖခင်အတွက် … မိသားစုတစ်စုလုံးရဲ့ အခြေခံစားဝတ်နေရေးကိုတာဝန်ယူနိုင်လောက်တဲ့ အလုပ်တစ်ခုခုကို စီမံပေးဖို့လဲ လိုပါလိမ့်မယ် …။ ဒီလိုလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင် … အဲဒီ့ မိသားစုတစ်စုအတွက် အဲဒီ့ ပြဿနာဟာ ပြေလည်သွားနိုင်ပါတယ် …။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ့လိုမိသားစုတွေများစွာရှိနေပါတယ် …။ ဒါကြောင့် အဲဒီ့လိုမိသားစုတွေ အားလုံးရဲ့ ဘ၀ကို ဆွဲတင်ဖို့ဆိုတာကတော့ တစ်ဦးတစ်ယောက်ခြင်းစီရဲ့အားနဲ့ မရနိုင်တော့ပါဘူး …။
ဒါဆို နောက်ထပ်အခြေအနေတစ်ခုကို စဉ်းစားကြည့်ပါမယ် …။ အထက်မှာ စဉ်းစားခဲ့တာက ကလေးရော၊ သူ့မိသားစုကိုပါ ဆွဲတင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့နည်းပါ …။ အဲဒီ့လိုမျိုးလုပ်နိုင်ဖို့ သိပ်မလွယ်ကူဘူးဆိုရင် … ကလေးနဲ့ မိသားစုကိုခွဲပြီး ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်ပါမယ် …။ ပညာမသင်နိုင်ပဲ အလုပ်ထွက်လုပ်နေရတဲ့ ကလေးငယ်တွေကို အခြေခံအားဖြင့် နှစ်ပိုင်းခွဲလို့ရပါတယ် … တစ်မျိုးကတော့ မိဘက ကျောင်းဆက်မထားနိုင်တော့လို့ ဒီအတိုင်းအအားမနေခိုင်းချင်တာနဲ့ အလုပ်ထွက်လုပ်ခိုင်းထားတာမျိုးပါ။ မိဘက သူ့အပေါ်မှာ မှီခိုနေရတာမျိုး မဟုတ်သေးပါဘူး။ နောက်တစ်မျိုးကကျတော့ … မိသားစုရဲ့ စားဝတ်နေရေးအတွက် ကိုယ်တိုင်ကကို တစ်တပ်တစ်အား ပိုက်ဆံထွက်ရှာမှရတော့မယ်ဆိုတဲ့ အခြေအနေကို ရောက်လာလို့ ကျောင်းထွက်ပြီး ငွေရှာနေရတာမျိုးပါ။ ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ သူ့ရဲ့လုပ်အားခကို မိသားစုက မှီခိုနေရတာမျိုးဖြစ်သွားပါပြီ။ ပထမကလေးမျိုးဆိုရင်တော့ သူ့ကို အလုပ်မလုပ်ခိုင်းပဲ ကျောင်းထားပေးမယ်ဆိုရင် မိဘတွေအနေနဲ့ အလွယ်တကူ ကြည်ကြည်ဖြူဖြူလက်ခံကြမှာဖြစ်ပေမယ့် … ဒုတိယကလေးမျိုးဆိုရင်တော့ … သူ့ကို မိသားစုကနေခွဲထုတ်ပြီး သူ့ဘ၀ကို မြှင့်တင်ပေးချင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ အခက်အခဲတွေရှိလာပါတယ် …။
ဒီဆောင်းပါးလေးရေးနေတုန်း ... စိတ်ကသိကအောင့်ဖြစ်စရာကိစ္စလေးတွေပေါ်လာတာနဲ့ ဆက်ရေးဖို့ရာ အာရုံမလာဘူးဖြစ်သွားတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆက်ရေးမှာပါ ...။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေလဲ စိတ်ပါရင် ကျွန်တော်နဲ့ အတူတူ ပူးပေါင်းခေါင်းစားနိုင်ပါတယ် ...။ လုပ်ရပ်တွေအားလုံးဟာ စိတ်ကူးတွေမှာ အခြေတည်ခဲ့ကြတာပဲ မဟုတ်လားဗျာ ...။
ရေးသားသူ - NayPhoneLatt at Friday, December 07, 20074comments:
ဆေးကောင်းတစ်ခွက်လား အဆိပ်ခွက်လား …
ကျွန်တော် ဘလော့ဂါ နဲ့ ချက်တာ ဆိုတဲ့ ပို့စ်လေးကိုရေးတုန်းက ချက်တင်မှာလဲ ကောင်းကျိုးတွေရှိပါသေးတယ်။ အဲဒါတွေကိုလဲ ရေးပါဦးလို့ ပြောလာသူတွေရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်လဲရေးမယ် ရေးမယ်နဲ့ အခုမှပဲရေးဖြစ်ပါတော့တယ် …။ ပထမတော့ ချက်တင်ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကိုချည်းချရေးဖို့စဉ်းစားပေမယ့် … ရေးရင်းရေးရင်းနဲ့ ချက်တင်စွဲနေသူတွေအတွက် ဖြစ်နိုင်တဲ့ ဆိုးကျိုးတွေပါ ပါသွားပါတယ်။ ကျွန်တော်ရေးထားတာတွေထဲမှာ အစွန်းရောက်နေတဲ့ အမှားမျိုးများပါခဲ့မယ်ဆိုရင် အဲဒီ့အမှား ဟာ လူငယ်တွေကို ချက်တင်ဝဲဂယက်ထဲမှာပဲနစ်မြောပြီး အကျိုးမဲ့ဖြစ်မနေစေချင်လို့ဆိုတဲ့ စေတနာနဲ့ မှားတဲ့ စေတနာအမှားမျိုးပဲ ဖြစ်မယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်။ နောက်ပြီး ကျွန်တော်သုံးနှုံးတဲ့ စကားလုံးတွေထဲမှာ နည်းနည်းလေးပြင်းထန်တာမျိုးတွေ ပါသွားမယ် ဆိုရင်လဲ အဲဒါဟာ ကရုဏာဒေါသောနဲ့ ပြောမိတယ်လို့ပဲ မှတ်ယူကြစေချင်ပါတယ် …။
ဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်ကိုကြည့်ပြီး တောင်တောင်အီအီလျှောက်စဉ်းစားနေမှာစိုးရိမ်လို့ ကျွန်တော် ဘာအကြောင်းကို ပြောချင်တာလဲ ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အရင်ဆုံးရှင်းရမယ်ထင်ပါတယ်…။ ကျွန်တော် အင်တာနက် (Internet) လို့ခေါ်တဲ့ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှာရှိကြတဲ့ ကွန်ပျူတာတွေကို တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးချိတ်ဆက်ပေးထားတဲ့ ကွန်ယက်ကြီးအကြောင်းနဲ့ အဲဒီ့အထဲကမှာ chatting နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့အမြင်လေးတွေအကြောင်းကို ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ မှတ်မှတ်ရရပြောရရင် ကျွန်တော် စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ အလုပ်သွားလုပ်တဲ့ အချိန် ၂၀၀၄ ခုနှစ်ရောက်မှ အင်တာနက်ဆိုတာကြီးနဲ့ အထူးတလည်ကို ရင်းနှီးခဲ့တာပါ ...။ စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ အင်နာနက်သုံးစွဲခွင့်တွေကို အရောင်းအ၀ယ်လုပ်တဲ့ Internet Service Provider (ISP) တွေက ပုဂ္ဂလိကပိုင်တွေဖြစ်ပါတယ် ...။ အင်တာနက် အသုံးပြုခွင့်ကိုလည်း သိပ်မများတဲ့ နှုန်းထားနဲ့ ရရှိနိုင်တဲ့အတွက် အိမ်တိုင်းလိုလိုမှာ အလွယ်တကူ အသုံးပြုနိုင်ကြပါတယ် ...။ ဒါကြောင့်လဲ မနက်အိပ်ရာထတာနဲ့ ကမ္ဘာလောကကြီးက ကိုယ့်စားပွဲပေါ်မှာ ကိုယ်ကြည့်လိုမြင်လိုသမျှကို ကြည့်နိုင်မြင်နိုင် လေ့လာနိုင်အောင်လို့ အဆင့်သင့်စောင့်မျှော်နေသလိုပါပဲ ...။ အထူးသဖြင့် တက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေမှာဆို သိပ်ကောင်းပါတယ် ...။ ကျောင်းဝန်းတစ်ခုလုံး ဘယ်နေရာ ကပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ရဲ့ အိတ်ဆောင်ကွန်ပျူတာ (Laptop) လေးကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ ကြိုးမဲ့အင်တာနက် စနစ် (Wireless Internet System)နဲ့ အင်တာနက်ကို အသုံးပြုလို့ ရပါတယ် ...။
ကျွန်တော်က စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ ကျောင်းသွားတက်တာမဟုတ်ပဲ ... အလုပ်သွားလုပ်တာဆိုတော့ အမှန်အတိုင်းဝန်ခံရမယ်ဆိုရင် ... အင်တာနက်ဆိုတာကြီးကို စတင်သုံးဆွဲခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက် ကတော့ ခွဲခွာနေရတဲ့ မိသားစု၊ ဆွေမျိုးအသိုင်းအ၀ိုင်း၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ဖို့ဆိုတာ တစ်ခုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ...။ အရှင်းဆုံးပြောရရင် ... Chatting Services တွေရဲ့အကူအညီနဲ့ ခွဲခွာနေရတဲ့ မိသားစုဝင်တွေနဲ့ နီးကပ်နေသလိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ...။ နောက်ပြီး ... MIRC လို chatting site တွေနဲ့ လည်း အတူနေသူငယ်ချင်းရဲ့ မိတ်ဆက်ပေးမှုကြောင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ် ...။ အဲဒီ့မှာ ကျွန်တော့်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက် က တဆင့်မြင့်တက်သွားပါတယ် ...။ အဲဒါကတော့ မြန်မာအချင်းချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် သူငယ်ချင်းအသစ် အသစ်တွေရှာဖွေ မိတ်ဖွဲ့ပြီး တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အသိအမြင်တွေဖလှယ်ရယူ မယ်ဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ်။ MIRC ထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံက သူတွေနဲ့ တွေ့သလို နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့လဲ ကျွန်တော် မိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ် ...။ သူ့နိုင်ငံအကြောင်းတွေမေး၊ သူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းတွေမေးရင်းနဲ့ အင်မတန်မှဗဟုသုတရသလို ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ အကြောင်းတွေ၊ မြန်မာတွေရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု၊ မြန်မာတို့ရဲ့ စိတ်ထား နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သဘာဝအလှတရားတွေ အကြောင်းတွေကိုပြောပြရင်း မြန်မာဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုတာကိုပါ ... ကမ္ဘာကသိအောင် လုပ်ခွင့်ရခဲ့ဖူးပါတယ် ...။ MIRC ထဲက မြန်မာတွေအများစုကတော့ မြန်မာအချင်းချင်း Chat ကြတဲ့ အခါမှာ Burglish လို့ ခေါ်တဲ့ မြန်မာအသံထွက်ကို အင်္ဂလိပ်လိုပေါင်းပြီး ပြောတတ်ကြပါတယ် …။ Nay Kaung Lar … ? Sate nyit nay loe … စသည်ဖြင့် ပြောကြပါတယ် …။ ကျွန်တော်ကတော့ Burglish ဆိုတဲ့ Language ကို ဘယ်လိုမှသဘောမကျတာကြောင့် အင်္ဂလိပ်လိုပဲပြောဖြစ်တာများပါတယ် …။ အဲဒါကြောင့်လဲ အင်္ဂလိပ်စာ သိသိသာသာကို တိုးတက်လာပါတယ် …။ ကျွန်တော်နဲ့ Chat ထဲမှာတွေ့ဖြစ်သမျှသူတော်တော်များများကိုလဲ Burglish အစား English လိုပဲပြောဖို့ ကျွန်တော်တိုက်တွန်းလေ့ရှိပါတယ်။ နဲနဲတော့ ပင်ပန်းပါတယ် …။ ကိုယ်ပြောချင်တာကို သူနားလည်အောင် လှည့်ပတ်ရှင်းပြရတာမျိုးတွေရှိသလို သူပြောတာကိုလဲ နားလည်အောင် Dictionary ခဏခဏလှန် နေရတာမျိုးတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒီ့လို အပင်ပန်းမခံပဲ အလွယ်လမ်းလိုက်ပြီး Burglish ကိုပဲ ထဲထဲဝင်ဝင်သုံးခြင်းဟာ အင်္ဂလိပ်စာတိုးတက်မှုကိုနှောင့်နှေးစေသလို … နိုင်ငံခြားသားသူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေရရှိနိုင်မှုကိုလဲ တားမြစ်လိုက်သလိုဖြစ်သွားပါတယ် …။
ကျွန်တော်ရဲ့ chatting ၀င်ရခြင်းရည်ရွယ်ချက်က နိုင်ငံအရပ်ရပ်က သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေ တိုးပွားချင်ပြီး အစစအရာရာမျှဝေခံစားနိုင်ကြဖို့ ဖြစ်တာကြောင့် ကျွန်တော်က ကျွန်တော့်ရဲ့ Profile အမှန်တွေကို ပြောပြပြီးမှ Chat လေ့ရှိပါတယ် …။ ဒါကလည်း သိပ်ကိုအရေးကြီးပါတယ် …။ ကျွန်တော့်အမြင် အရတော့ ဘယ်သူမှန်းမသိ၊ ဘယ်အရွယ်မှန်းမသိ၊ ဘယ်ကမှန်းမသိ၊ ဘာမှန်းမသိတဲ့ လူတစ်ယောက်နဲ့ တရင်းတနှီးမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒမရှိပါဘူး …။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် အမှန်တွေကိုပဲပြောသလို … တဘက်ကလူတွေပြောတာကိုလဲ ယုံကြည်မိခဲ့တာတွေရှိခဲ့ဖူးပါတယ် …။ ဒါပေမယ့် တော်တော်များများက အမှန်အတိုင်းမပြောကြဘူးဆိုတာကို တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်သိလာခဲ့ပါတယ် …။ chatting သုံးနေကြတဲ့ လူငယ်တွေအနေနဲ့ ဒီလို လိမ်ညာခြင်းအမှုကို ပေါ့ပေါ့တန်တန်ပဲ သဘောထားပြီး လွယ်လင့်တကူလုပ်နေကြတာဟာ တိုင်းပြည်အတွက် အင်မတန်မှကိုရင်လေးစရာကောင်းပါတယ်။ ဒီိလိုလုပ်ခြင်း အားဖြင့် တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး ယုံကြည်မှုတွေကင်းမဲ့လာစေနိုင်သလို၊ မိမိရဲ့စကားအတွက် မိမိတာဝန်ယူရတယ်ဆိုတဲ့ အသိစိတ်တွေကိုလဲ ခေါင်းပါးလာစေပါတယ်။ အသုံးပြုခြင်း ရည်ရွယ်ချက် မတူညီမှုတွေက တစ်ဦးတစ်ယောက်ခြင်းစီရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကို ကွဲပြားသွားစေတာကိုလဲတွေ့ရပါတယ်။ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတိုးပွားချင်လို့၊ အတွေးအခေါ်အတွေးအမြင်တွေ ဖလှယ်ချင်လို့၊ ဗဟုသုတတွေရှာမှီးချင်လို့ ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ chatting ကိုသုံးတဲ့သူက သူ့ရည်ရွယ်ချက်တွေထဲက အတိုင်း မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေရ၊ အတွေးအခေါ်အတွေးအမြင်အသစ်တွေရ၊ ဗဟုသုတတွေရလာနိုင်သလို … ဘာမှမယ်မယ်ရရမရှိတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ လူငယ်ဘာဝအီစီကလီလုပ်ချင်ကြလို့ ၊ နောက်ပြီး တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဘယ်သူမှန်းမသိရတာကြောင့် ပြစ်ပြစ်နှစ်နှစ်တွေပြောကြပြီး … စိတ်အရသာခံချင်ကြလို့ စတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ chatting ကိုသုံးကြသူတွေကတော့ ဘယ်လို ကောင်းကျိုးမျိုးမှ ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပဲ … စိတ်ဓါတ်တစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားနိုင်တဲ့အထိကို ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ အချို့တွေရှိပါတယ် … သူဘယ်သူမှန်း ကိုယ်ဘယ်သူမှန်းမသိခြင်းကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး … လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စကားလုံးတွေကို တစ်တစ်ခွခွပြောကြပြီး အရသာခံကြတာတွေရှိပါတယ် …။ စိတ်ဝေဒနာတစ်မျိုးလို့တောင် ယူဆလို့ရတဲ့ အခြေအနေပါ …။
ချက်တင်မထိုင်ရရင်မနေနိုင်လောက်အောင် ချက်တင်စွဲနေကြသူတွေကို ကျွန်တော်တွေ့ဖူးပါတယ် …။ အထူးသဖြင့် ပြင်ပလောကမှာ ပြဿနာ တစ်ခုခုရှိနေကြတဲ့သူတွေ၊ မယ်မယ်ရရအလုပ်လုပ်စရာမရှိပဲ အားနေကြတဲ့သူတွေနဲ့ စိတ်အားသတ္တိချို့တဲ့သူတွေများပါတယ် …။ အာရုံငါးပါးကိုစွဲလမ်းတာမဟုတ်ပဲ … စကားလုံးတွေရဲ့အားကို စိတ်နဲ့စွဲယူခံစားပြီး အဲဒီ့ခံစားမှုတွေကို စွဲလမ်းနေကြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုခုကို စွဲလမ်းပြီဆိုကတည်းက အဲဒီ့သူရဲ့ စိတ်အားသတ္တိကနဲနေပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ ဆေးလိပ်မသောက်ရရင် မနေနိုင်တာ၊ အရက်မသောက်ရရင်မနေနိုင်တာ၊ ချက်တင်မထိုင်ရရင်မနေနိုင်တာ စတာတွေဟာ … မညှာမတာတမ်းတွေးရမယ်ဆိုရင် သက်မဲ့အရာတွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကို ကိုယ့်ရဲ့စိတ်က ခံနေရတာပါ ။ ရှက်တတ်မယ်ဆိုရင် အင်မတန်မှကိုရှက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ Globalization ခေတ်ကြီးထဲမှာ အင်တာနက်ကို တစ်နေ့မသုံးရရင် ခေတ်နောက်ကျကျန်ခဲ့လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ စကားနဲ့သွားပြီး မရောထွေး စေချင်ပါဘူး။ အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းဟာ ချက်တင်ထိုင်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး …။ ဆီနဲ့ရေလိုကွာပါတယ် …။ အင်တာနက်ပေါ်မှာ အခြားသုံးစရာတွေအများကြီးပါ။ ယူတတ်မယ်ဆိုရင် ယူစရာတွေအများကြီးပါ။ ပေးချင်တယ်ဆိုရင်လဲ ပေးလို့ရနိုင်တာ အင်တာနက်ပါ။ ဘာလုပ်ချင်လဲ၊ ဘာသိချင်လဲ၊ ဘာလိုအပ်သလဲ၊ ဘာတွေကြားချင်လဲ၊ ဘာတွေပြောချင်လဲ … အင်တာနက်ထဲမှာ သူများထွင်ထားတဲ့လမ်းတွေရှိသလို ကိုယ်တိုင်ထွင်ချင်တဲ့ လမ်းရဲ့အစကိုလဲ ရှာဖွေတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ အင်တာနက်ထဲမှာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးက လူများစွာရဲ့ ဦးနှောက်ပေါင်းများစွာ ကိန်းဝပ်နေပါတယ်။ မသိသူကျော်သွား သိသူဖော်စားဆိုတဲ့ စကားလိုပါပဲ …။ တန်းဖိုးမထားတတ်သူတွေကြားထဲမှာ အင်တာနက်ဆိုတာကြီးက မြားနတ်မောင် ဘ၀ကနေ မတက်တော့တာ တီထွင်ခဲ့သူတွေကိုယ်စား ရင်နာရပါတယ်။ အချို့အရာတွေကိုတော့ လူငယ်ထုအနေနဲ့ မသိလို့ဆိုတာ မျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ် …။ ဒါကြောင့် ဒီအခြေအနေတစ်ခုကို ကျော်လွှားဖို့ မီဒီယာတွေမှာလဲ တာဝန်ရှိတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ လူငယ်ထုအနေနဲ့လဲ စူးစမ်းလေ့လာမှုတွေလုပ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ် …။ လူငယ်တွေအနေနဲ့ အင်တာနက်ရဲ့အသုံးဝင်မှုကို အခြေခံအဆင့်ကတည်းက ကြေကြေ ညက်ညက် မသိခဲ့ခြင်းကလည်း ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုဖြစ်လာစေတဲ့ … အကြောင်းအရင်းတစ်ခုပါ …။ အင်တာနက်နဲ့ စာကြည့်တိုက်ဟာ ကျောင်းသားတိုင်းရဲ့ ကျောင်းသားဘ၀မှာ ထိတွေ့မှုအများဆုံးအရာတွေ ဖြစ်နေသင့်ပါတယ် …။ ကျွန်တော်တို့လဲ ကျောင်းသားဘ၀ကနေကြီးပြင်းလာခဲ့တာပါ …။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ အချက်တွေနဲ့ ရေးခဲ့တဲ့ အက်ဆေးတစ်ပုဒ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေရဲ့ဘ၀မှာ မရှိသလောက်ကိုရှားပါတယ်။ ဆရာ၊ ဆရာမတွေ ရေးပေးတာတွေကိုပဲ နှုတ်တိုက်ကျက်ခဲ့ကြရတာပါ …။ ဒါဟာ ကျောင်းပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်း လူ့လောကကြီးထဲမှာ ထပ်မံလိုအပ်တဲ့ ဖြည့်ဆည်းစရာတွေကို ကိုယ်တိုင်သင်ယူလေ့လာရတဲ့နေရာမှာ အများကြီးသွားပြီးထိခိုက်ပါတယ် …။ ကျွန်တော်လက်လှမ်းမီ သလောက် နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေမှာ အဲဒီ့လိုမဟုတ်ပါဘူး …။ ဆရာတွေက ကျောင်းသားတွေကို ခေါင်းစဉ်တစ်ခုချပေးပြီး အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်တာတွေကို ကျောင်းသားတွေက အင်တာနက်တို့၊ စာကြည့်တိုက်တို့မှာ ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေလေ့လာဖတ်ရှုပြီး ရေးသားကြရတာများပါတယ်။ အနိမ့်ဆုံးအနေနဲ့ ၈တန်းကျောင်းသားတစ်ယောက်ဟာ ကိုယ့်ကို ခေါင်းစဉ်တစ်ခုချပေးရုံနဲ့ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်တာတွေကို ဆရာ၊ ဆရာမတွေကရေးပေးတာမျိုးမဟုတ်ပဲ ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေလေ့လာသုံးသပ်ပြီး ကိုယ်ပိုင်အမြင်နဲ့ အက်ဆေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်အောင် ရေးနိုင်သင့်ပါတယ် …။ ရှက်စရာကောင်းတာက အဲဒီ့လိုအရည်အချင်းမျိုး အချို့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေမှာတောင်မရှိတာပါ …။ နောက်ပြီး သူများတကာတွေ Creating the Green Environment, The role of NGOs in future စတဲ့ အက်ဆေးတွေရေးနေချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ Myself, My Teachers, My Native Town, Visit to the Pagoda ဆိုတဲ့အဆင့်တွေကနေ တက်သင့်နေပါပြီ …။
လူငယ်တွေအနေနဲ့ အင်တာနက်သုံးတဲ့အချိန်တွေထဲက ဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းကို chatting အတွက်သုံးနေလဲ … အခြားအရာတွေကိုရော ဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်း သုံးနေလဲဆိုတာကို ကိုယ့်ကိုယ်ကို မညှာတမ်းမေးပြီး မညာတမ်း ဖြေကြည့်လိုက်ပါ …။ လုပ်နိုင်သူတွေအနေနဲ့လဲ စစ်တမ်းကောက်ယူကြည့်သင့်ပါတယ် …။ ချက်တင် သုံးတဲ့ ရာခိုင်နှုန်းက များနေသရွေ့တော့ … တိုးတက်မှုတွေ နှောင့်နှေးနေဦးမှာပါပဲ … ။ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ တိုးတက်မှုတွေကနေ တိုင်းပြည်ရဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုပါ နှောင့်နှေးသွားစေနိုင်ပါတယ် …။ နှောင့်နှေးရုံမကပဲ ဆုတ်ယုတ်သွားတဲ့ အဖြစ်မျိုးအထိကို ရောက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ … အများအတွက် အသုံးဝင်နေတဲ့ ဆေးကောင်းတစ်ခွက်ဟာ ကျွန်တော်တို့လက်ထဲရောက်မှ အဆိပ်ခွက်ဖြစ်သွားတယ်လို့ ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုရှိတာက ကျွန်တော်တို့ သောက်နေတာ ဆေးတစ်ခွက်လား အဆိပ်ခွက်လားဆိုတာဟာ ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အပေါ်မှာပဲ မူတည်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါ …။ ကဲ … ပြော … ကျွန်တော်တို့ ဆေးကောင်းတစ်ခွက်သောက်ကြမလား … အဆိပ်သောက်ကြမလား …။
ရေးသားသူ - NayPhoneLatt at Monday, December 03, 20077comments:
ရေးသားသူ - NayPhoneLatt at Friday, November 30, 20073comments:
ညီငယ်မောင်ပွတ်အစပျိုးခဲ့တဲ့ ဘလော့ဂ်တိုင်းဟာ အခုဆို စာမျက်ခွက်တွေ ဝေေ၀ဆာဆာ၊ ပူးပေါင်းပံ့ပိုးသူတွေ ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ အတော့်ကို အရှိန်ရနေခဲ့ပါပြီ။ အခြေအနေအရပ်ရပ်ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာဘလော့ဂါတွေရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ရပ်နေသလို ဖြစ်နေရတဲ့ အချိန်မှာ ဘလော့ဂ်တိုင်းလေးက ထွက်လာတော့ ... ကျွန်တော် ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရပါတယ် ...။ ဒီဘလော့ဂ်တိုင်း ဂျာနယ်လေးဟာ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာဘလော့ဂါတွေရဲ့ အမှတ်ရစရာ အဖြစ်အပျက်လေးတွေကို ဟာသလေးနှောရင်း ကွန်ပျူတာထက် အက္ခရာတင်ပေးပြီး မြန်မာဘလော့ဂါတွေရဲ့ စုစည်းမှုသမိုင်း၊ ရင်းနှီးမှု တံတိုင်းတွေကို ပိုမိုခိုင်မာလာစေတဲ့ အထောက်အကူပြု ကြားခံနယ်လေး တစ်ခုလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး ...။ ဘလော့ဂ်တိုင်းလေးကို ဒီနေရာလေးမှာ သွားပြီးဖတ်လိုက်ကြမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေမမှား ဘူးဆိုတာ ခင်ဗျားတို့သိသွားပါလိမ့်မယ် ...။
ရေးသားသူ - NayPhoneLatt at Monday, November 26, 2007 1 comment:
ရေးသားသူ - NayPhoneLatt at Tuesday, November 20, 2007 13 comments:
အလှအပကို အရမ်းမက်ပြီး မှန်ရှေ့ကမခွာနိုင်ဖြစ်နေကြတဲ့ သူတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်။ လူတိုင်းလှချင်ကြတာ မှန်ပေမယ့် အစွန်းမရောက်စေချင်တဲ့ စေတနာနဲ့ ဒီဝတ္ထုတိုလေးကို ရေးဖြစ်ပါတယ်။
`အကျည်းတန် မှန်ကြိုက်´ ဆိုတဲ့စကားကို ကျွန်တော်ကြားဖူးပေမယ့် ... သိပ်တော့ လက်မခံချင်လှဘူး... ။ အကျည်းတန်ပါတယ်ဆိုမှ၊ ရုပ်ဆိုးပါတယ်ဆိုမှ မှန်ကို ခဏခဏသွားကြည့်နေရင် ... ကိုယ့်ရုပ်ကို ပြန်မြင်မြင် နေရပြီးစိတ်ဆင်းရဲနေရတာပဲအဖတ်တင်မှာပေါ့ ...။ တကယ်တမ်းက ချောတဲ့လူတွေ၊ လှတဲ့သူတွေက မှန်ပိုကြိုက်ကြတာဗျ။ `လူတိုင်းဟာ ကိုယ့် ကိုကိုယ် အချစ်ဆုံးပဲ´ ဆိုတာကို အားလုံးသိကြမှာပေါ့ ...။ အဲ ... ဒါပေမယ့် ... အဲဒီလို မှန်အရမ်းကြိုက်ပြီး ... ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကို ကြည့်မ၀ရှုမ၀ဖြစ်နေကြတဲ့သူတွေက... သူများတွေ ထက်ပိုပြီး သူတို့ကိုသူတို့ ပိုချစ်ကြတယ်ဗျ...။ မယုံရင်ကျွန်တော့်ကိုမေးကြည့်လေ ...။ နောက်နေတာမဟုတ်ဘူး... တကယ်ပြော နေတာ ...။ တကယ်ပြောဆို ... ကျွန်တော်က ကိုယ်တွေ့ဗျ...။
မိမိမှန်တဲ့ ...။ အဲဒါက ကျွန်တော့်အမေရဲ့ညီမ ကျွန်တော့်ရဲ့ အဒေါ်ပေါ့။ သူ့နာမည်အရင်းက `မငြိမ်းသူ´တဲ့...။ ဒါပေမယ့် မှန်ကြိုက်လွန်းလို့၊ မှန်ရှေ့ကမခွာလို့ ... နာမည်အရင်းပျောက်ပြီး `မိမိမှန်´လို့တွင်တယ်။ ကျွန်တော်က အခုလက်ရှိ သူနဲ့တစ်အိမ်တည်းနေတာဆိုတော့ သူဖြစ်ပျက်နေတာတွေကို တစ်ချိန်လုံး မြင်နေရသလို ...။ သူငယ်ငယ်ကအကြောင်းတွေကိုလည်း တစ်လုံးမကျန်သိနေတာပေါ့ ...။ သူကချောတာတော့ တော်တော်ချောတယ်ဗျ ...။ အခု သူ့အသက်က၃၅နှစ်လောက်ရှိနေတာတောင် ... ဖြတ်သွားဖြတ်လာတွေက ငေးကြည့်ရတုန်း... ကာလသား တွေကမျက်စိကျတုန်း ... ။ ဒါပေမယ့် သူကတော့ အခုအချိန်အထိ အပျိုကြီးဘ၀နဲ့ ကျွန်တော့် အဖေအိမ်မှာ ကပ်နေရတုန်းလေ ...။ ဒီလောက်ချော၊ ဒီလောက်လှရဲ့သားနဲ့ ဘာလို့ အခုအချိန်အထိအပျိုကြီး ဖြစ်နေရတာလဲလို့ ခင်ဗျားတို့ မေးချင်သလိုပဲ ကျွန်တော်လည်း မေမေ့ကို မေးခဲ့ဖူးတယ်။ အဲဒီမှာ ... အဓိက သွားတွေ့ရတာက အဲဒီမှန်ကိစ္စပဲပေါ့ဗျာ ...။ ဒီလိုဗျ ... ... ...
ကျွန်တော်တို့အိမ်ခေါင်းရင်း ဘုရားစင်နဲ့ကပ်လျက်မှာ ကိုယ်လုံးပေါ်မှန်ကြီး တချပ်ရှိတယ်...။ ဖေဖေက ပြောတော့ ... အဘိုး ... အဘွားတွေရဲ့ အမွေအနှစ်တဲ့ ...။ တကယ့်ကို ရှေးမှန်ကြီးမှ ... ရှေးမှန်ကြီးအစစ်ပါ...။ မှန်ဘောင်တွေကလည်း ကနုတ်ပန်းတွေနဲ့ ... လေးလိုက်တာကလည်း လွန်ရော...။ ကျွန်တော်တို့ တစ်မိသားစုလုံးကတော့ ဘိုဘွားအမွေမို့မပျောက်မပျက် ထိန်းသိမ်းရုံကလွဲပြီး အဲဒီမှန်ကြီးကို သိပ်အဖက်မလုပ်ကြပါဘူး။ အဲ ... ကျွန်တော့်အဒေါ် မိမိမှန်ကတော့ လူမှန်းသိတတ်စအရွယ် ငယ်ငယ်ကတည်းက အဲဒီမှန်ကြီးကို အရိပ်တကြည့်ကြည့်ပဲတဲ့ ...။ တကယ်တမ်းက မှန်ကို ဘိုးဘွားအမွေမို့ အရိပ်တကြည့်ကြည့် လုပ်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ မှန်ထဲကသူ့ကိုယ်သူအရိပ်တကြည့်ကြည့်လုပ်နေတာပါ...။ မေမေပြန်ပြောပြတာကိုသိရသလောက်တော့ သူမှန်ကြိုက်တဲ့ပုံက လွန်ကိုလွန်လွန်းပါတယ်ဗျာ ...။ ဘယ်လောက်တောင်ဆိုးသလဲဆို ... ဧည့်သည်လာလို့ ဧည့်ခံစကားပြောရင်တောင် ... ဧည့်သည်ကို မှန်ကျောပေးထိုင်ခိုင်း ... သူကမှန်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာထိုင်ပြီး ... စကားပြောနေရင်း မှန်ကို လှမ်းလှမ်းကြည့် လွန်းလို့ ဧည့်သည်တွေခမျာ... နောက်ကျောမလုံဖြစ်ပြီး ပြန်ပြန်ပြေး ရရှာသတဲ့ ...။ မေမေ့ဧည့်သည်တွေလာလို့ ... ကော်ဖီဖျော်ချခိုင်းရင်လည်း ကော်ဖီခွက်ကြီးတန်းလန်းနဲ့ မှန်ကိုလှမ်းကြည့်လို့ ... ခလုတ်တိုက်ပြီးကော်ဖီတွေ မှောက်မှောက်ကျတာလည်း အခါခါတဲ့ ...။ မေမေကတော့ တစ်ဦးတည်းသော ညီမကို ချစ်လို့ အလိုလိုက်ထားပေမယ့် ဖေဖေနဲ့တွေ့ရင်တော့ ဒေါ်လေးမှန်တို့မစားသာဘူး။ ဟိုတစ်ခါကဆိုလဲ ... ဖေဖေဘုရားရှိခိုးနေတုန်းကြီး မှန်ရှေ့လာပြီး ... ဟိုဖက်လှည့်လိုက် ... ဒီဖက်လှည့်လိုက် ထမီကိုပြင်ဝတ်လိုက် လုပ်နေလို့ ဖေဖေကထအော်ပြီးမှန်ကြီးကို ရိုက်ခွဲမလို့လုပ်တာလေ ...။ မေမေရော ၊ ကျွန်တော်တို့ပါ မနည်းဝိုင်းဆွဲလိုက်ရသေးတယ်။ အဲဒီနေ့ကစပြီး သူလည်း ဖေဖေရှိတဲ့အချိန်ဆို မှန်ရှေ့မှာ ကိုးရိုးကားရား မလုပ်ရဲတော့ပေမယ့် မှန်ရှေ့ ကဖြတ်သွားတိုင်း ဖေဖေ့အရိပ်အခြေကို ကြည့်ပြီးမှခိုးခိုးကြည့်တတ်တယ်။
သူ ... အဲဒီလို မှန်ကြိုက်တာနဲ့ ယောင်္ကျားမရတာနဲ့ ဘာဆိုင်လို့လဲလို့ ... ဆန္ဒတွေစောပြီးမမေးနဲ့ဦး ...။ ကျွန်တော်ဆက်ပြောတာကို ဆုံးအောင်နားထောင်လိုက်ဦး ... ။ သူနဲ့မှန် ...။ မှန်နဲ့ သူ ... အဲဒီင်္လို ကြည့်ကြည့်ပြီး အဆင်ပြေနေတာက အကြောင်းမဟုတ်ဘူးဗျ။ တခါတခါ သူက မှန်ကို မမှန်ဘူးဆိုပြီး ပြဿနာရှာတာက ကျွန်တော်တို့မိသားစုအတွက်ရော ၊ အားလုံးအတွက်ပါပြဿနာ ...။ သူ့အသက် ၂၀ကျော်လောက်က အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခု မေမေပြောပြဖူးတာလေး ခင်ဗျားတို့ကိုပြန်ဖောက်သည်ချရဦးမယ် ...။ သူက အစားအသောက်လည်းဂရုစိုက်၊ လေ့ကျင့်ခန်းကလည်း မှန်မှန်လုပ်တော့ ... ပြစ်မျိုးမထင် လှချင်တိုင်းလှနေတာတဲ့ ...။ ဒါပေမယ့် အပုပ်ကောင်ရုပ်ဆောင်နေကြတာပဲဗျာ ... သူလည်း ပုထုဇဉ်ပဲ ဘယ်ခံနိုင်မှာလဲ...။ ဟဲ... ဟဲ... အဲဒီစကားတွေကမေမေပြောပြတုန်းကတော့ မပါဘူးဗျ။ ကျွန်တော်ဖာသာ ကျွန်တော် ထပ်ကွန့်ထားတာ...။ အဲ... ပြောနေတာ ဘယ်တောင်ရောက်သွားပြီလဲ ...။ သြော် ... အဲဒီလိုလှနေပေမယ့် တစ်နေ့ကျတော့ သူ့နှာခေါင်းထဲမှာ ၀က်ခြံပေါက်ပြီးနှာခေါင်းကြီး ကယောင်လာရောတဲ့ဗျာ ...။ အဲဒါသူက ... မှန်ထဲမှာ သူ့ကိုယ်သူ ပြန်မြင်ပြီး အော်လိုက်တာ... လိပ်ပြာလွင့်မတတ်ဆိုတော့ ... မေမေတို့တင်မကဘူး။ အိမ်နီးနားချင်းတွေပါ ရောက်လာ ကြရောတဲ့...။ အဲဒီမှာ မေမေက `မိမှန်... မိမှန် ... ဘာဖြစ်လို့လဲ ´ လို့ မေးတော့ သူက ဘာဖြေတယ်မှတ်လဲ...။ `မှန်ထဲမှာ ... မှန်ထဲမှာ... ဘယ်သူလည်းမသိဘူး... နှာခေါင်းကြီးအကြီးကြီးနဲ့´ တဲ့ဗျာ...။ သူ့ အဖြေကိုကြားတော့ မေမေတို့ရောအိမ်နီးနားချင်းတွေရော အကုန်လုံး ... လည်းထိတ်ထိတ်ပြာပြာဖြစ်သွားကြပြီး မှန်ကြီးနားက ခွာတဲ့သူခွာ၊ မှန်ကြီးကို မ၀ံ့မရဲ တိုးကြည့်တဲ့သူကကြည့်နဲ့ ကယောက်ကယက် ကို ဖြစ်ကုန်တော့တာပဲတဲ့ ...။ အဲဒါနဲ့ သူ့ကို ရေမန်းတွေဘာတွေတိုက်မှ သူ့နှာခေါင်းကြီးယောင်နေတာကို တွေ့ရတယ်တဲ့...။ အဲဒီတော့မှာမေမေလည်း အဖြစ်မှန်ကို သဘောပေါက်ပြီး သူ့ကို အမျိုးမျိုးဖျောင်းဖျပေမယ့် သူကတော့မရဘူး။ မှန်ထဲက ပုံက သူမဟုတ်ဘူးလို့ပဲ ဒိုင်ခံ ငြင်းနေတော့တာပဲတဲ့ဗျာ ။ ဒီလောက်ဆို သူ့ရဲ့ အခြေအနေက သာမန်ထက်နဲနဲ လွန်ကဲနေပြီဆိုတာကို ခင်ဗျားတို့ရိပ်မိလောက်ရောပေါ့။
အဲဒီအဖြစ်အပျက်မျိုးက တစ်ခါလဲမဟုတ်၊ နှစ်ခါလည်းမဟုတ် အခါခါဖြစ်လာတော့ မေမေလည်း ဘာမှ မပြောတော့ပဲ လွှတ်ထားလိုက်ရတယ်တဲ့။ ကျွန်တော်၆တန်းနှစ်လောက်တုန်းကအဖြစ်တစ်ခုကိုပြောပြဦးမယ်။ အဲဒီတုန်းကဆို ရုံးရောက် ဂါတ်ရောက်ကိုဖြစ်သွားတာဗျ။ အဲဒီနေ့တုန်းက ကျွန်တော်က အခန်းထဲမှာ စာထိုင်ကျက်နေတယ် ...။ မေမေကနောက်ဖေးမှာ ထမင်းချက်နေတယ်။ ဖေဖေကလည်းသူ့အခန်းထဲမှာ စာဖတ်နေတယ်နဲ့တူပါတယ်။ သူကတော့ထုံးစံအတိုင်း ဘယ်သူမှ အနားမှာမရှိတော့ မှန်ရှေ့မှာထိုင်ပြီး မှန်ထဲကသူ့ကိုယ်သူ ဘာတွေပြောနေတယ် မသိပါဘူး။ ခဏနေတော့ သူ့ရဲ့စူးစူးဝါးဝါးအော်သံကို ကြားတာနဲ့ ကျွန်တော်တို့အားလုံးထွက်ကြည့်ကြတာ ... ယောင်္ကျားပျိုတစ်ယောက်က သူ့အနားရောက်နေပြီး သူ့လက်ကို ဆွဲနေတာတွေ့ရတာပဲ ... အဲဒါနဲ့ ဖေဖေနဲ့ အသံကြားလို့ရောက်လာကြတဲ့ ကာလသားသုံးယောက်လောက်နဲ့ အဲဒီလူကို ၀ိုင်းချုပ်ပြီး ရပ်ကွက်ရုံးကိုပို့ကြတာပေါ့ ...။ ဟိုလူ့ခမျာလည်းမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ ကုပ်ကုပ်ကလေးလိုက်လာ ရှာပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း စပ်စုတတ်တဲ့သူဆိုတော့ ဖေဖေနဲ့ အတူရုံးကို လိုက်သွားတယ်လေ ...။ ရုံးရောက်တော့ ရပ်ကွက်လူကြီးက မေးတာပေါ့...။
`မင်းကို ငါဒီရပ်ကွက်ထဲမှာအရင်မမြင်ဖူးပါဘူး ... မင်းဘယ်ကလဲ´
`ကျွန်တော်ရန်ကုန်က ဧည့်သည်ပါခင်ဗျာ ... ကျွန်တော့်အမ၀မ်းကွဲဆီအလုပ်ကိစ္စနဲ့ ခဏလာတည်းနေတာပါ ...´
`မင်းသူတပါးအိမ်ပေါ်ကို တက်ပြီး သူများသမီးပျိုတစ်ယောက်ကို ဆွဲလားရမ်းလားလုပ်တာ ... မင်းကို ပိုင်နက်ကျူးလွန်မှုနဲ့ရော၊ ကာအိနြေ္ဒဖျက်မှုနဲ့ရော တရားစွဲလိုရတယ်ကွ ... မင်းနားလည်းလား ...။´
အဲဒီလူကမြို့သားလို့မပြောရဘူးရုပ်ကတော့ခပ်ဖြောင့်ဖြောင့်ပါ...။ ၀တ်ထားစားထားတာကလည်း အပျံစားပေါ့ ...။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ ဒေါ်လေးရဲ့ရည်းစားလို့တောင် ထင်မိပါသေးတယ်။ ရပ်ကွက်လူကြီးက ပြစ်မှုတွေကို ပြောပြတော့ အဲဒီလူတော်တော် လန့်သွားပြီး တုံတုံရီရီနဲ့ ပြောတယ်။
`ဒီလို ... ဒီလိုပါ ... အန်ကယ်ရယ် ကျွန်တော် အဲဒီအိမ်ရှေ့ကဖြတ်သွားတော့ အဲဒီအမက ... ကျွန်တော့်ကို `ဟိတ်´ လို့လှမ်ခေါ်ပြီးပြောတယ် ...´
အဲဒီ့လူဆက်ပြောမယ့် စကားကို ရပ်ကွက်လူကြီးရော၊ ကျွန်တော်တို့အားလုံးပါ သိပ်စိတ်ဝင်စားသွားကြတယ်။
`သူက ... သူက ... ဟိတ် ... နင်သိပ်ချောတာပဲ ... နတ်ပြည်က ကျလာသလားလို့တောင်ထင်ရတယ် ... နင့် ကိုငါသိပ်ချစ်တာပဲဟယ်တဲ့ ...´
ကျွန်တော်မရယ်မိအောင်စိတ်ကို မနည်းချုပ်တီးထားရတယ်...။ ကျွန်တော်ပါးစပ်ကို လက်နဲ့ အုပ်ပြီး တခွိခွိ ဖြစ်နေလို့ ဖေဖေကတောင်လှမ်းဟန့်သေးတယ်။ ရပ်ကွက်လူကြီးကလည်း ဟိုလူ့ကို ဆက်မပြောဖို့ လက်လှမ်းတားတယ် ...။ ပြီးတော့ ... ဖေဖေ့ကိုဘယ်လိုလဲဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ မေးငေါ့ပြတယ်။ ဖေဖေကလည်း မျက်နှာကြီးတစ်ခုလုံးနီရဲနေပြီ ...
`ကိုခင်ထွန်း ... ခင်ဗျားဖာသာ နဲနဲဆုံးမပြီးပြန်လွှတ်လိုက်ပါတော့ဗျာ ...´
... လို့ပြောပြီး ရှက်ရှက်နဲ့ကျွန်တော်တို့သားအဖ အိမ်ပြန်လာခဲ့ရတယ်။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ဖေဖေက ဒေါ်လေးကို အိမ်ပေါ်ကနှင်ချနေလို့ မေမေနဲ့တောင်ရန်ဖြစ်ကြသေးတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ကျွန်တော့် အခန်းထဲပြေးဝင်ပြီး တံခါးကို အလုံပိတ်ပြီး ရယ်လိုက်ရတာ အူကို နာနေတာပဲ။ ဟိုလူက ဒေါ်လေး မှန်ထဲ က သူ့ကိုယ်သူကြည့်ပြီး ပြောနေတာကို သူ့ပြောတယ်ထင်ပြီး အိမ်ပေါ်အထိ တက်လာတာကိုးဗျ ...။ ဟား ... ဟား ... ဟား ... ဟား ... ။
ဒေါ်လေးကသာမန်ထက်ပိုထူးတာတော့အမှန်ပဲ ဒါပေမယ့် ထူးပုံထူးနည်းက မှားနေတော့ အားလုံးက ရူးတယ်လုိ့ပဲ သတ်မှတ်လိုက်ကြတယ်။ ဖေဖေက ဆေးရုံပို့ဖို့ပြောတယ်။ မေမေကငြင်းတယ်။ ကျွန်တော်ကမှန်ကြီးကို ရောင်းစားပစ်ဖို့ အဆိုပြုတယ် ။ ဒေါ်လေးက ကျွန်တော့် ကို စားတော့ဝါးတော့မတတ်ကြည့်တယ်။ နောက်ဆုံး မေမေ့ရဲစကားတစ်ခွန်းက အားလုံးကိုအနိုင်ရသွားပြီး ... ဒေါ်လေးရော မှန်ကြီးပါ ချမ်းသာခွင့်ရသွားကြတယ်။ မေမေပြောတာက ...
`ဘိုးဘွားပိုင်ပစ္စည်းကိုလည်း ရောင်းစရာမလိုဘူး ...။ ငါ့ညီမကိုလည်းဆေးရုံပို့စရာမလိုဘူး ... ကိုယ့်ရုပ်ရည် အလှကို အရမ်းတွယ်တာပြီး ချစ်နေတဲ့ ငါ့ညီမလေးက ဘယ်သူ့ကိုမှလည်းဒုက္ခမပေးဘူး ... ကိုယ့်ကို ချစ်ပြီး သူများတွေကိုဒုက္ခပေးနေကြတဲ့ သူတွေအပုံကြီးထက်တော့အများကြီးသာပါသေးတယ် ... ´ တဲ့ ...။
ကဲ ... ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ ...။
ရေးသားသူ - NayPhoneLatt at Monday, November 19, 20074comments:
တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ ဂစ်တာအိုလေးရယ် …
ကျွန်တော်က ငယ်ငယ်ကစိတ်တွေကို ပြန်မျှော်နေသလို
ဂစ်တာလေးက အသံမပါတဲ့သီချင်းတစ်ပုဒ်ကိုအော်ဆိုနေတယ် …။
ကျွန်တော် … လမ်းပေါ်မှာပဲ လမ်းစတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရတယ် …။
ကျွန်တော် … အမှောင်ထဲမှာဖျက်ရိုက်ခံရပြန်တယ်။
အချို့အဆိပ်တွေက မဖိတ်ပဲရောက်လာတတ်ကြသတဲ့ …
(သေချာတယ်) ကျွန်တော် မပျော်ခဲ့ဘူး ။ ။
ရေးသားသူ - NayPhoneLatt at Thursday, November 15, 20075comments:
စံပယ်ဖြူမဂ္ဂဇင်းမှာ ဖော်ပြခံခဲ့ရတဲ့ ဆောင်းပါးလေးတစ်ပုဒ်ပါ ...။ အင်တာနက်ထဲလျှောက်မွှေရင်း တွေ့ခဲ့တဲ့စာကြောင်းလေးတွေကို ဆင့်ပွားခံစားပြီးရေးဖွဲ့ထားတာပါ ...။ ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာတင်နိုင်ဖို့ စာရိုက်ပေးတဲ့ ညီမဆုဝေ ကိုလဲ ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောပါရစေ ...။
ငွေကြေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုကြတာတွေ ဝေဖန်ပြောဆို ကြတာတွေကို ကျွန်တော် အခါခါ ဖတ်ဖူး ကြားဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီတစ်ခါ ဖတ်လိုက်ရတဲ့ စာပုဒ်လေးလို ဦးနှောက်နဲ့ စဉ်းစားဆင်ခြင်မိရုံမကပဲ ရင်ထဲအထိကို ရိုက်ခတ်သွားခဲ့တာမျိုးကတော့ ရှားပါတယ်။ အမည်မသိ စာဆိုတစ်ယောက်က ရေးခဲ့တာပါ။ အဲဒီစာသားလေးတွေကို ဖတ်နေရင်းက ဆင့်ပွားတွေးမိတဲ့ အတွေးလေးတွေအကြောင်း အားလုံးကို ကျွန်တော် မျှဝေပါရစေ။
MONEY CAN BUY A BED, BUT NOT A SLEEP.
အိပ်ယာကို သင် ၀ယ်ယူလို့ရမယ်။ အိပ်စက်ခြင်းကို ၀ယ်ယူလို့ မရဘူး။
ကတ်သီးကတ်သတ် ပြောချင်တဲ့သူတွေကတော့ အိပ်ဆေးတွေ ၀ယ်သောက်လို့ ရတာပဲလို့ ပြောကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ဓာတုဗေဒ ဆေးဝါးတွေရဲ့ အကူအညီကို ရယူပြီး အိပ်စက်ရပြီ ဆိုကတည်းက တကယ့်စစ်မှန် အေးချမ်းတဲ့ အိပ်စက်အနားယူမှုကို မရနိုင်ဘူးဆိုတာ သေချာသွားပါပြီ။ တကယ့်အကောင်းစား မွေ့ယာကြီးတွေကို ငွေနဲ့ဝယ်ယူလို့ ရပါတယ်။ ရေထဲမှာ ပေါလောမျောနေရသလို ခံစားရမယ့် မွေ့ယာကြီးတွေကိုလည်း အဆမတန်ဈေးနဲ့ ၀ယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားလို့ ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အိစက်ညက်ညောပြီး ရုပ်ခန္ဓာအတွက် သာယာမှုတွေ အပြည့်အ၀ ပေးနိုင်မယ့် အဲဒီလို မွေ့ယာကြီးတွေဟာ အပူအပင်ကင်းကင်းနဲ့ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်စက် အနားယူနိုင်ခွင့်တစ်ခုကို ပေးနိုင်ပါသလား။ ဟင့်အင်း…လို့ ဖြေရမှာပါ။ လောကမှာ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟတွေနဲ့ ဖြတ်သန်းကုန်လွန်ခဲ့ရတဲ့ တစ်နေ့တာရဲ့ အပူရှိန်တွေဟာ ညအထိတောင် ပါလာပြီး အိပ်စက်ခြင်းတွေကိုတောင် နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးပစ်နေကြတယ် ဆိုတာကို ပုထုဇဉ်တိုင်း ခံစားသိရှိဖူးကြလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ စကားလုံးလှလှသုံးပြီး ပြောရရင် လောကမှာ နေမ၀င်တဲ့ညများစွာဟာ လူတိုင်းလိုလိုမှာ အနည်းနဲ့အများ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ ဟုတ်ပါပြီ… အိပ်စက်ခြင်းကို ငွေနဲ့ဝယ်ယူလို့ မရနိုင်ရင် ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ အရယူနိုင်အောင် ကြိုးစားကြမလဲ။ အဓိက,ကတော့ စိတ်ပါပဲ။ တစ်ညတာ ငြိမ်းချမ်းစွာ အိပ်စက်အနားယူခွင့် ရဖို့ဆိုတာ ဖြတ်သန်းပြီးခဲ့တဲ့ တစ်နေ့တာထဲက ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထားတွေ၊ လုပ်ရပ်တွေ အပေါ်မှာ အများကြီး မူတည်သလို ဖြတ်သန်းရဦးမယ့် နောက်တစ်နေ့တာ အပေါ်မှာ ထားတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ သဘောထားအပေါ်မှာလည်း အများကြီး မူတည်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ တစ်နေ့တာ လုပ်ရပ်တွေဟာ မေတ္တာ၊ ကရုဏာ၊ မုဒိတာ စိတ်ထားတွေမှာ အခြေခံခဲ့ပြီး ကောင်းသောစေတနာနဲ့ ဖန်တီးခဲ့တာတွေချည်းပဲ ဆိုရင် အဲဒီသူဟာ သူ့ရဲ့ တစ်နေ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လို စိတ်ဖိစီးမှုမျိုးကိုမှ ခံရနိုင်စရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး။ တစ်ခါတစ်ခါ စေတနာကို ဝေဒနာဖြစ်သွားစေတဲ့ အခြေအနေမျိုးနဲ့ ကြုံရင်လည်း စိတ်ရှင်းရှင်းနဲ့ ဥပေက္ခာပြုလိုက်ရုံပါပဲ။ နောက် အနာဂတ်နဲ့ ပတ်သက်ရင်လည်း လောကဓံတရားဆိုတာနဲ့ ကံ,ကံ၏အကျိုး ဆိုတာကို နှလုံးသွင်းထားပြီး ကြီးမားတဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်နေမှုတွေ ထားမနေဘူးဆိုရင် အဲဒီသူရဲ့အိပ်စက်ခြင်းကို နှိပ်စက်အနိုင်ယူမယ့် စိတ်အခြေအနေတွေ ဖြစ်မလာနိုင်တော့ပါဘူး။ အဲဒီတော့ လူတိုင်းလူတိုင်း ငွေကြေးတွေ ပုံပေးပြီး ၀ယ်ယူလို့ မရနိုင်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာ အိပ်စက်ခွင့်ကို စိတ်ထားတွေ အသန့်စင်ဆုံးထားပြီး အနှောင်အဖွဲ့တွေကို မှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့ ကြည့်ကြရင်း ရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ကျွန်တော် ဆန္ဒပြုမိပါတယ်။
နေစရာနေရာကို သင် ၀ယ်ယူလို့ ရနိုင်တယ်။ အိမ်ဆိုတာကိုတော့ ၀ယ်ယူလို့ မရနိုင်ဘူး။
ဒီစာကြောင်းလေးကို ဒီလို ဘာသာပြန်လိုက်ရတာ စိတ်ထဲမှာ နည်းနည်းတော့ မ၀ံ့မရဲ ဖြစ်မိပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စကားလုံး နှစ်လုံးဖြစ်တဲ့ House နဲ့ Home ရဲ့ ကွဲပြားမှုကို လူတိုင်း ခံစားသိနိုင်ပေမယ့် အဲဒါကို ထိထိရောက်ရောက် ပြန်ဖို့ကြတော့ မလွယ်တော့ပါဘူး။ တကယ်တမ်းကျတော့ House ဆိုတာ အိမ်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အဲဒါကို ကျွန်တော်က နေစရာနေရာလို့ ဘာသာပြန်လိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုပြန်ရတာကလည်း နောက်က Home ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ကျွန်တော်က `အိမ်´လို့ အနက်ဖွင့်ချင်လို့ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူများတွေတော့ ဘယ်လိုခံစားရမယ် မသိပါဘူး။ ကျွန်တော်ကတော့ အိမ်လို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ အဖေ၊ အမေ၊ ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေနဲ့ အတူတူ စည်းစည်းလုံးလုံး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေလာခဲ့တဲ့ သာယာကြည်နူးဖွယ်ကောင်းတဲ့ အဖေတို့ အမေတို့ရဲ့ အိမ်ကလေးကိုပဲ သွားသွား မြင်ယောင်မိတတ်လို့ပါ။ ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ကတော့ `အိမ်´ဆိုတဲ့ စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကို နေစရာနေရာ တစ်ခုလို့ပဲ အဓိပ္ပါယ် မဖွင့်ဆိုချင်ပါဘူး။ အဲဒီစကားလုံးလေးရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ မိသားစုတစ်စု၊ မပျောက်မပျက် မလျော့ပါးသွားနိုင်တဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေ နောက်ပြီး မမြင်နိုင်ပေမယ့် အခိုင်မာဆုံး ချည်နှောင်ထားကြတဲ့ အဖြူထည် သံယောဇဉ်ကြိုးတွေ စတဲ့ , စတဲ့ အဓိပ္ပါယ်တွေ များစွာ ရှိနေပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တို့တွေ နေစရာ နေရာတစ်ခုအဖြစ် တိုက်ခန်းအကောင်းစားကြီးတွေ၊ ခြံကြီးဝင်းကြီးတွေကို ငွေရှိရင် ၀ယ်လို့ရနိုင်ပေမယ့် အဲဒီနေစရာ နေရာတစ်ခုကို `အိမ်´လို့ အမည်တပ်နိုင်ဖို့အတွက် အထက်မှာ ကျွန်တော် ဖော်ပြတဲ့ စိတ်အခြေအနေတွေနဲ့ ခံစားမှုတွေကို ဘယ်လို တန်ဖိုးဖြတ်ပြီး ဘယ်နေရာမှာ သွားဝယ်ကြမလဲ။ ကျွန်တော်ကတော့ လူသားတွေအားလုံး ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်အာရုံနဲ့ နှလုံးသားတစ်ခုလုံးကို စိတ်ကျေနပ်မှုတွေ ပေးနိုင်ပြီး ကြည်နူးပျော်ရွှင်စရာ ကောင်းတဲ့ နေရာလေးအဖြစ် မှတ်ယူနိုင်တဲ့ `အိမ်´လို့ အမည်တပ်နိုင်တဲ့ နေရာတွေမှာပဲ နေထိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းနေမိပါတယ်။
MONEY CAN BUY FINERY BUT NOT BEAUTY.
လက်ဝတ်တန်ဆာတွေကို ၀ယ်ယူလို့ ရချင်ရမယ်။ အလှတရားကိုတော့ ၀ယ်လို့မရနိုင်ဘူး။
လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ မတည်မြဲတဲ့ ရုပ်ခန္ဓာကြီးကိုပဲ သူတစ်ပါးရဲ့ အမြင်မှာ လှနေစေဖို့၊ ကြည့်ကောင်းနေစေဖို့ နည်းမျိုးစုံသုံး၊ လက်ဝတ်တန်ဆာ မျိုးစုံသုံးပြီး ပြင်ဆင်ခြယ်သကြလေ့ ရှိပါတယ်။ ဒါကလည်း လူ့ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုလို့ ဆိုနိုင်တာကြောင့် အပြစ်ပြောစရာတော့ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ အပေါ်ယံ အပြင်ပန်း၊ ဖီးလိမ်းခြယ်သ ပြင်ဆင်ထားမှုတွေဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ တကယ့်အလှတရား မဟုတ်ဘူး ဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကို သိထားဖို့ လိုပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ တကယ့်အလှတရားဟာ သူဝတ်ဆင်ထားတဲ့ အ၀တ်အစား၊ လက်ဝတ်တန်ဆာတွေရဲ့ တန်ဖိုးပေါ်မှာ မတည်ပါဘူး။ သူ့စ်ိတ်ရဲ့ ဖြူစင်မှု၊ ကြည်လင်မှု၊ ငြိမ်းအေးမှုတွေမှာ တည်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်မှာ အလှတရား တကယ်ရှိ,မရှိ ဆိုတာကိုလည်း အဲဒီလူကို မြင်လိုက်ရတဲ့သူရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ဘယ်လို ခံစားလိုက်ရတယ် ဆိုတဲ့ အချက်ပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ဆုံးဖြတ်သင့်ပါတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ အဖိုးတန် အ၀တ်အစားတွေကို ခေတ်ဆန်ဆန် ၀တ်ဆင်ထားပြီး ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတစ်ခုမှာ ကနေတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ ဘာတန်ဖိုးကြီး လက်ဝတ်လက်စားမှ မပါဘဲ ရိုးရိုးယဉ်ယဉ်လေး ၀တ်ဆင်ပြီး သနပ်ခါးပါးကွက်ကြားလေးနဲ့ ဘုရားကို အာရုံပြုနေတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက် ဘယ်သူ့မှာ အလှတရား ပိုရှိတယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ သတ်မှတ်ကြမလဲ။ ဘယ်မိန်းကလေးကို မြင်ရတဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့ ရင်ထဲမှာ ကြည်နူးမှုတစ်ခုနဲ့ ငါ့သမီးလေးသာ ဖြစ်လိုက်ပါတော့၊ ငါ့နှမလေးသာ ဖြစ်လိုက်ပါတော့ ဆိုတဲ့ စ်ိတ်မျိုးတွေ ဖြစ်လာမလဲ။ ရှင်းပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ရိုးရှင်းလုံခြုံတဲ့ ၀တ်စားဆင်ယင်မှုနဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား ကြည်လင်သန့်စင်မှုတွေကိုသာ ကျွန်တော် ပြောချင်တာပါ။ ဘာမှမသိ နားမလည်ဘဲ တုံးတုံးအအကြီး နေရမယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာ ရှိတာက ခေတ်ရဲ့ ပြောင်းလဲမှု ရေစီးထဲမှာ ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေ ရောပါမသွားစေချင်တဲ့ စေတနာပါ။ နောက်ပြီး လူတစ်ယောက် ဘယ်လောက် ၀တ်ကောင်းစားလှတွေ ၀တ်ဆင်ထားပြီး ဘယ်လောက်ပဲ ဖီးလိမ်းခြယ်သထားပါစေ။ သူ့ရဲ့စိတ်ကို လောဘတွေ၊ ဒေါသတွေ၊ မောဟတွေ ဖုံးလွှမ်းနေမယ်ဆိုရင် သူ့မျက်နှာနဲ့ ရုပ်သွင်ဟာ မြင်ရသူရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ဘယ်လိုမှ လှတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်ကတော့ ငွေကြေးနဲ့ ချိန်စက်ဝယ်ယူလို့ မရနိုင်တဲ့ စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အလှတရားတွေ လူတိုင်းမှာ ရှိစေချင်တာပါပဲ။
MONEY CAN BUY BOOKS BUT NOT BRAIN.
စာအုပ်တွေကိုတော့ ၀ယ်ယူလို့ရမယ်။ ဦးနှောက်ကိုတော့ မရဘူး။
ကမ္ဘာကျော် ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေရဲ့ ဆေးရည်စိမ်ထားတဲ့ ဦးနှောက်တွေကို အလှကြည့်ဖို့ အဆမတန် ဈေးပေးပြီး ၀ယ်ယူချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ရကောင်းရပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီဦးနှောက်တွေ လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ဆင်ခြင်စဉ်းစားမှု၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၊ သုံးသပ်ဝေဖန်မှုတွေကို အဲဒီ ဦးနှောက်ကြီးတွေကို ၀ယ်လိုက်ရုံနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ရနိုင်မလား၊ မရနိုင်ပါဘူး။ နောက်ပြီး အသိပညာ၊ အတတ်ပညာများစွာဟာ စာရွက်စာတမ်းတွေ၊ စာအုပ်တွေ အဖြစ်နဲ့ ထွက်ပေါ်လာကြတဲ့အခါ အဲဒီစာအုပ်တွေကို ကျွန်တော်တို့ ၀ယ်ယူလို့ရပေမယ့် အဲဒီစာအုပ်တွေထဲက အချက်အလက်တွေ၊ အတွေးအခေါ်တွေ၊ အယူအဆတွေကို ဆင်ခြင်ပိုင်းခြားမယ့် ဦးနှောက်တစ်စုံကိုတော့ ၀ယ်ယူလို့ မရနိုင်ပါဘူး။ စာအုပ်တစ်အုပ်ရဲ့ ငွေကြေးတန်ဖိုးဟာ အကန့်အသတ် ရှိနိုင်ပေမယ့် အဲဒီစာအုပ်ကို ဖတ်ပြီး ဦးနှောက်နဲ့ ဆင်ခြင်စဉ်းစား သုံးသပ်ဝေဖန်မှုတွေရဲ့ နောက်မှာရလိုက်တဲ့ အသိ၊ အတတ်ပညာတွေရဲ့ တန်ဖိုးကတော့ အကန့်အသတ်မဲ့ပါတယ်။ ဒါတင်မကဘဲ စာအုပ်တစ်အုပ်က ပေးနိုင်တဲ့ ကြည်နူးမှု၊ ၀မ်းသာမှု၊ ငြိမ်းချမ်းအေးမြမှု၊ နှစ်သက်ကျေနပ်မှု စတဲ့ ခံစားမှုတွေရဲ့ အဖိုးအခကလည်း တိုင်းဆလို့ မရနိုင်ပါဘူး။ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မာန်မာန စတဲ့ မလိုလားအပ်တဲ့ စိတ်အခြေအနေတွေကို ဖြစ်စေတဲ့ စာအုပ်မျိုးတွေ ဆိုရင်တော့ လွှင့်ပစ်လိုက်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ စာဖတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ကို အကြမ်းဖျဉ်း လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် လူတစ်ယောက်ဟာ စာအုပ်တစ်အုပ် ဖတ်မယ်၊ အဲဒီမှာ ခံစားမှုတွေ ဖြစ်လာမယ်၊ ဒါမှမဟုတ် အသိတစ်ခုခု၊ အတတ်တစ်ခုခုကို စာတွေ့အနေနဲ့ ရလိုက်နိုင်တယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်လာတဲ့ ခံစားမှု၊ ရလိုက်တဲ့အသိ ( သို့မဟုတ် ) အတတ်တစ်ခုခုကို သူက လုပ်ရပ်တွေအဖြစ် ပြောင်းလဲပစ်တော့မယ်။ ဒီနေရာမှာ ဦးနှောက်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍက အရမ်းကို အရေးပါလာပါတယ်။ ကိုယ် ဒီစာအုပ်ကြောင့် ခံစားလိုက်ရတဲ့ ခံစားမှုဟာ ဖြစ်သင့် မဖြစ်သင့်၊ ဒီစာအုပ်ကပေးတဲ့ အသိဟာ မှန်၏ မမှန်၏ စတာတွေကို သူ့ဦးနှောက်နဲ့သူ စဉ်းစား ဆုံးဖြတ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ အားလုံး ပိုက်ဆံနဲ့ ၀ယ်လို့ရတဲ့ စာအုပ်တွေကို ဖတ်ကြပြီး ၀ယ်ယူလို့ မရနိုင်တဲ့ ဦးနှောက်နဲ့ အကောင်းဆုံး ဆင်ခြင်သုံးသပ်နိုင်ကြဖို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
MONEY CAN BUY AMUSEMENT BUT NOT HAPPINESS.
ဖျော်ဖြေမှုတွေကို ၀ယ်ယူလို့ ရနိုင်မယ်။ ပျော်ရွှင်မှုကိုတော့ မရနိုင်ပါဘူး။
အရှိန်အဟုန်နဲ့ တိုးတက်လာနေတဲ့ ခေတ်ရဲ့ရေစီးကြောင်းထဲမှာ ဖျော်ဖြေမှု ပေးနိုင်မယ့် ကိရိယာ တန်ဆာပလာနဲ့ အသုံးအဆောင် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများစွာ ပေါ်လာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအရာတွေက တကယ့်ပျော်ရွှင်မှု အစစ်အမှန်တွေကို ပေးနိုင်ပါရဲ့လား။ မသေချာပါဘူး။ အရှင်းဆုံးပြောရရင် စိတ်တည်ငြိမ် အေးချမ်းမှု မရှိဘဲ ပျော်ရွှင်မှု အစစ်အမှန်ကို ဘယ်တော့မှ မရနိုင်ပါဘူး။ အခုခေတ် လူတော်တော်များများကို ကြည့်ရင် တန်ဖိုးကြီး ဇိမ်ခံပစ္စည်းတွေကို သုံးပြီး ပျော်ရွှင်မှုတွေကို ခဏတာ ငှားယူနေကြတာကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ တကယ်တမ်းကျတော့ ဖျော်ဖြေမှုတွေ အားလုံးဟာ အမှန်တကယ် စစ်မှန်တဲ့ ပျော်ရွှင်မှုကိုပေးတာ မဟုတ်ဘဲ အားလုံးကို ခဏမေ့ပစ်ထားနိုင်ဖို့ အာရုံအသစ်တွေကို ခဏတာ ဖန်တီးပေးရုံမျှသာ ဖြစ်ပါတယ်။ အချို့ဆိုရင် အဲဒီ ခဏတာ ပျော်ရွှင်မှုလေးကိုတောင် မခံစားနိုင်လောက်တဲ့အထိ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ၊ သောကတွေ၊ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မာန်မာနတွေနဲ့ ပိနေကြတဲ့သူတွေ ရှိပါတယ်။ တကယ့်ကို သနားစရာ ကောင်းပါတယ်။ တကယ်တမ်း ဖျော်ဖြေမှုတွေက ပေးတဲ့ ခဏတာ ပျော်ရွှင်မှုတွေကို အပြည့်အ၀ ရရှိခံစားနိုင်ဖို့ ဆိုတာကလည်း ကိုယ့်စိတ်ကို အတတ်နိုင်ဆုံး ရှင်းထုတ်ပြီး အရာရာကို ခဏမေ့ထားနိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ အဲဒါကလည်း တကယ်တမ်းကျတော့ မလွယ်လှပါဘူး။ ဖျော်ဖြေမှု ဆိုတာတွေဟာ ဘ၀မှာ မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ အရာတွေထဲမှာ တစ်ခုအပါအ၀င်ပါ။ ကြည့်ရှုသူတွေကို စိတ်တစ်ခုလုံး နစ်မြောပြီး အရာအားလုံးကို ခဏမေ့သွားစေတဲ့ ဖျော်ဖြေမှုတွေဟာ အောင်မြင်တာပါပဲ။ လူတိုင်းလူတိုင်း ပိုက်ဆံနဲ့ ၀ယ်ယူထားတဲ့ ဖျော်ဖြေမှုတွေက ပေးတဲ့ ခဏတာ ပျော်ရွှင်မှုတွေကို အပြည့်အ၀ ခံစားနိုင်ကြပြီး ဘာဖျော်ဖြေမှုမှ မလိုဘဲ ပိုင်ဆိုင်နိုင်တဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုလည်း စိတ်ကို အဖြူစင်ဆုံး၊ အငြိမ်းချမ်းဆုံး၊ အအေးမြဆုံး၊ အရှင်းသန့်ဆုံးထားပြီး ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုမိပါတယ်။
MONEY CAN BUY A PASSPORT TO EVERYWHERE BUT NOT HEAVEN.
နေရာတကာကို သွားဖို့အတွက် နိုင်ငံကူး လက်မှတ်ကို ၀ယ်ယူလို့ ရချင်ရမယ်။ နိဗÁÁာန်ကိုတော့ သွားလို့မရနိုင်ဘူး။
မူလစာရေးသူကတော့ ကောင်းကင်ဘုံ ( Heaven ) လို့ ရေးထားပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦး ဖြစ်တာကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းရဲ့ နောက်ဆုံးပန်းတိုင်ဖြစ်တဲ့ နိဗÁÁာန်ကိုပဲ ယူပြီး ပြောပါ့မယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘယ်နေရာကိုပဲ သွားချင်သွားချင် ငွေကြေး လုံလုံလောက်လောက်နဲ့ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ( passport ) သာ ရှိရင် ကျွန်တော်တို့ သွားလို့ရပါတယ်။ ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ ခေတ်မီတိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုမှာသာ မီလျံနာ သူဌေးကြီးတစ်ယောက်လောက် ဖြစ်နေပြီဆိုရင် ကမ္ဘာပေါ်သာ မကပါဘူး အာကာသထဲကိုတောင် ခြေဆန့်လို့ ရပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလို နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ရှိနေရုံနဲ့ ပိုက်ဆံတွေ ထားမကုန်အောင် ရှိနေရုံနဲ့ မျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့ရာ မဖြစ်နိုင်တာကတော့ နိဗÁÁာန်ပါ။ ရှိတဲ့ငွေအားလုံးကို ကုသိုလ်ရေးအတွက် လှူလိုက်ရင်ရောကွာလို့ မေးစရာ ရှိပါတယ်။ အဲဒါဆိုရင်လည်း ကျွန်တော်က ဒါနတစ်ခုတည်းနဲ့ နိဗÁÁာန်ကို မျက်မှောက်မပြုနိုင်ပါဘူး လို့ပဲ ဖြေရမှာပါ။ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာ ကုသိုလ်တွေကို တည်ဆောက်ပြီး မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးလမ်းကို လျှောက်နိုင်မှသာ ရုပ်တရား၊ နာမ်တရားတွေ ချုပ်ငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့ နိဗÁÁာန်ကို မျက်မှောက်ပြုနိုင်မှာပါ။
ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုတစ်ခုကို ပိုက်ဆံပေးပြီး ရယူနိုင်ပါတယ်။ ကယ်တင်မှုတွေကိုတော့ မရနိုင်ပါဘူး။
ဒီအကြောင်းလေးကိုလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တစ်ယောက်အနေနဲ့ပဲ ကျွန်တော် ပြောပါ့မယ်။ ဗုဒ္ဓဘုရား ဟောကြားခဲ့တဲ့ တရားတော်တစ်ခု ရှိပါတယ်။ `အတ္တာဟိ အတ္တနော နာထော´ မိမိကိုယ်သာ ကိုးကွယ်ရာတဲ့။ အိုခြင်း၊ နာခြင်း၊ သေခြင်း ဆိုတဲ့ မရှောင်လွှဲနိုင်တဲ့ ဒုက္ခတွေကနေ လွတ်မြောက်နိုင်ဖို့ဆိုတာ မိမိကိုယ်ကို မိမိ ကယ်တင်ရမှာပါ။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားက ဒုက္ခအလုံးစုံတို့ရဲ့ ချုပ်ငြိမ်းရာဟာ နိဗÁÁာန်ဖြစ်တယ်။ အဲဒီ နိဗÁÁာန်ကို မျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့ ဒီလိုနေ၊ ဒီလိုထိုင်၊ ဒီလိုကျင့်ကြံပြီး ဒီလမ်းကြောင်းကို လျှောက်ရမယ်ဆိုတာကို လက်တွေ့ပြသွားတဲ့ အနှိုင်းမဲ့ စံပြပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကို ငွေတွေ ပုံပေး၊ စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေ ပုံပေးပြီး တပည့်တော်ကို ကယ်တင်ပါလို့ တောင်းဆိုလို့ မရပါဘူး။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကို ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ ကိုးကွယ်ပါတယ်လို့ ပြောရုံနဲ့လည်း အဲဒီဒုက္ခတွေကနေ လွတ်မြောက်ဖို့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားက လုပ်ပေးနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ မိမိကိုယ်ကို မိမိကသာ ကယ်တင်နိုင်မှာပါ။ အခုလက်ရှိ ချမ်းသာလှပါတယ်၊ ကြွယ်ဝလှပါတယ် ဆိုတဲ့သူတွေ အနေနဲ့လည်း အခုလက်ရှိ ဘယ်လိုတန်ခိုးရှင်မျိုးကိုမှ ပိုက်ဆံတွေ ပုံပေး၊ အကြွင်းမဲ့ ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ပြီး ဒီဒုက္ခတွေက လွတ်မြောက်အောင် ကျွန်တော့်ကို ကယ်တင်ပေးပါလို့ တောင်းဆိုလို့ မရနိုင်ပါဘူး။ လူသားအားလုံး မိမိကိုယ်ကို ကယ်တင်နိုင်ကြပါစေ။
ရေးသားသူ - NayPhoneLatt at Tuesday, November 13, 20072comments: